YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, February 08
8 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
2807K View Download
htin kyaw htet to Dr lwanshwe.mp3
2020K Play Download
NLD Statement [ 8.2.2011 ].pdf
1239K View Download
8 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.doc
2136K View Download
GW statement _February 8, 2011_.pdf
387K View Download
8 Feb 2011 Yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/08/20110အကြံပြုခြင်း
နိုင်ငံရေး အကြပ်အတည်းများ၊ လက်နက်ကိုင်တပ်မတော် ပြီင်္းတော့ နိုင်ငံရေးအင်အားစု
မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၀
ပထမဦးဆုံးကတော့ ဆရာရေ … အင်န်အယ်ဒီရဲ့ တရားဝင်ပါတီဖြစ်တည်မှုကို စစ်အစိုးရတရားရုံးက အယူခံခွင့် ပယ်ချလိုက်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ အပတ်က ထိုင်းနိုင်ငံက အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေက မြန်မာပြည်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြပြန်တာကလည်း လက်ရှိ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာပဲ မှတ်ပုံတင်ပါလို့ တိုက်တွန်းတာတွေ ပြောလာတယ်။ အဲဒါလေးကို နည်းနည်းလောက် ပြောလို့ရမလားခင်ဗျာ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကျနော်တို့က အင်န်အယ်ဒီင်္ပါတီက ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာ မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီးတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတခုဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့နဲ့အတူ မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်း ရှိခဲ့တယ်။ အခု ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာ ထပ်ပြီး မှတ်ပုံတင်စရာ မလိုဘူးလို့ ကျနော်တို့က ဆုံးဖြတ်ပြီး ရပ်တည် ခဲ့ပြီးပြီ။ ဒါကို တရားရုံးက အယူခံခွင့်ကို ပယ်ချလိုက်ပြီးတော့ တဖက်ကနေပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာ မှတ်ပုံတင်ခိုင်းနေတာကို ကျနော်တို့က လက်မခံနိုင်ဘူး။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ဥပဒေနည်းလမ်းတွေရှိနေသမျှနဲ့ ကျနော်တို့က ဒီတရားဝင်ရပ်တည်မှုအရေးကို ဆက်လက် ရင်ဆိုင်သွားမှာပဲ။ အခုလိုအခြေအနေမှာ ဒီထက်ပိုပြီး လုပ်ကြရမှာကတော့ နိုင်ငံတကာကဥပဒေ တရားရုံး၊ ခုံရုံးများမှာ လျောက်ထား တင်ပြပြီးတော့ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမှာပဲ ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို ပြောချင်ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာ စစ်အစိုးရက သူတို့စစ်အာဏာရှင်အလိုကျ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတရပ်ကို အင်န်အယ်ဒီပါတီ၊ စီအာရ်ပီပီမဟာမိတ် အင်အားစုတွေကို တန်ပြန် စိန်ခေါ်နိုင်ဖို့ မွေးယူဖန်တီးပြီးတော့ ၂၀၁၁ လွှတ်တော် ၃ ရပ်ကို ခေါ်ယူလိုက်ပြီ။ အဲသည်မှာ သူတို့စိတ်တိုင်းကျ စစ်သားတွေ၊ စစ်တပ်ပါတီ ကြံ့ဖွံ့တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ဆိုသူတွေကို ပွဲထုတ်လာတာကို တွေ့နေရပြီ ဆရာရယ်။ ဆရာတို့က သည်လွှတ်တော်တွေ၊ ပေါ်လာမယ့် အစိုးရတွေကို လက်ခံမှာလား။
ကျနော်တို့တတွေက စစ်အစိုးရ တဖက်သတ် အတည်ပြုခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို လက်မခံခဲ့ဘူး။ အဲသည် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို အသက်သွင်းမယ့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း ကျနော်တို့က ၀င်ရောက်ခြင်း မပြုခဲ့ဘူး။ အခု ရွေးကောက်ပွဲက ပေါ်ထွန်းလာတဲ့ လွှတ်တော်ဆိုတာကလည်း မြန်မာပြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူု့အခွင့်အရေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ အာမခံခြင်း မရှိတဲ့အတွက် ကျနော်တို့က လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ အခုလည်းပဲ အားလုံးမျက်မြင်ပဲ အခုကျင်းပနေတဲ့ လွှတ်တော်မှာ အတားအဆီး အကန့်အသတ် ပ်ိတ်ပင်ထားတာတွေ၊ လွတ်လပ်ပွင့်လင်းမှု မရှိတာတွေကို မြင်တွေ့နေကြရပြီ ဖြစ်တယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ အခုလိုမျိူး စစ်အာဏာရှင်တွေက သူတို့ရဲ့ လွှတ်တော်တွေကို ထူထောင်ခေါ်ယူထားတဲ့အချိန်မှာ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ ပြည်ပက အာဏာရှင်နိုင်ငံတခုဖြစ်တဲ့ အီဂျစ်မှာ အထွေထွေအကြပ်အတည်းကို သီးမခံနိုင်တော့တဲ့ လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေ၊ ပြည်သူလူထုတွေဟာ လူထုအုံကြွမှုကြီးတခုနဲ့ လက်ရှိအစိုးရကို သပ်ိတ်မှောက် ကန့်ကွက်မှုတွေ ပြုလုပ်နေကြတယ်။ အာဏာရှင် မူဘာရက်ကိုယ်တိုင်ကလည်း လက်နက်ကိုင်စစ်တပ်ကို အသုံးချပြီး အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ် ဖြေရှင်းတာတွေ မလုပ်နိုင်ဘူး။ သူကိုယ်တိုင်က လူထုကို အလျော့ပေး စေ့စပ်မှုတွေ လုပ်နေရတယ်။ အဲသည် နိုင်ငံတကာက စောင့်ကြည့်နေရတဲ့ အီဂျစ်ပြည် လူထုအုံကြွမှု အရေးအခင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာများ ပြောချင်ပါသလဲ ဆရာ။
ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံးမှာ ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် နိုင်ငံတွေမှာ စီးပွားရေး အကြပ်အတည်းတွေ ဆိုက်နေတယ်။ ဒါကြောင့် လူထုဟာ လက်ရှိအစိုးရတွေကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြလာကြတယ်။ သူတို့ဟာ စားဝတ်နေရေးကြပ်တည်းတာတွေ၊ အထွေထွေကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်မားတာတွေကို ဆက်ပြီး သီးမခံနိုင်တော့ဘူး။ ဒါတွေကို အီဂျစ်တို့ တူနီးရှားတိ်ု့ စတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ မြင်တွေ့နေရပြီ ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးကို ဂယက်ရိုက်တတ်တယ်။ အခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် အစိုးရတွေကော၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ အားလုံးက သင်ခန်းစာယူပြီး ပြင်ဆင်ကြမှ ဖြစ်မယ်။ ရင်ဆိုင်ကြမှ ဖြစ်မယ် ဆိုတာကို ပြောချင်တယ်။
မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ အဓမ္မမှုတွေ၊ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုတွေ၊ မတရားမှုတွေ အများအပြား ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက် လူထုရဲ့ မကျေနပ်မှုကနေ အုံကြွမှုတွေဆိုတာ အချိန်မရွေး ထပြီး ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရှိနေတယ်။
ဟုတ်ကဲ့။ အဲသည်လို လူထုအုံကြွမှု ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါ အီဂျစ်ပြည်မှာဆိုရင် နိုင်ငံရေးအုံကြွမှုပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့၊ ထိန်းသိမ်းဖို့ တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာပေးနိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေ၊ အစုအဖွဲ့တွေ၊ ခေါင်းဆောင်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခုချိန်အထိ မပေါ်ပေါက်လာသေးဘူးလို့ ပြောနေကြပါတယ် ဆရာ။ အဲသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံလိုမှာ ဆိုရင် အခု ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ လွှတ်တော်က ၀င်ရောက် ဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာလား။ သို့မဟုတ် လက်နက်ကိုင်ပြီး ဖြေရှင်းမယ့် စစ်အာဏာရှင်တွေ လက်ထဲပဲ ပြန်ရောက် သွားမှာလား။
ဒီလွှတ်တော်ကို ပြည်သူလူထုက အယုံအကြည်မရှိတဲ့အတွက် သူတို့တတွေက ဦးဆောင် ဖြေရှင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး လို့ ပြောချင်တယ်။ အဲသည်တော့ သူတို့နောက်က ကြိုးကိုင်နေတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေလက်ထဲကိုပဲ တိုင်းပြည်ရဲ့ ကံကြမ္မာကို ထိုးအပ်ရမယ့် အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။
သို့သော် လွှတ်တော်ပြင်ပရဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေက ၀င်ရောက် ထိန်းကွပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိသလားလို့ မေးမယ် ဆိုရင်လည်း စစ်အာဏာရှင်တွေက အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေ၊ ပါတီတွေ၊ ခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို တောက်လျောက် ဖိနှိပ် နှိမ်နှင်းထားတဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ အခမ်းကဏ္ဍရှိဖို့အရေးကလည်း အခုအခြေအနေမျိုးမှာ စိုးရိမ်စရာ ရှိနေတယ်။
အဲသည်တော့ စစ်တပ်ရဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်မှု ရပ်တည်မှုဟာ အဲသည်လို အခြေအနေမျိူးမှာ အရေးပါတယ်လို့ ပြောချင်တယ်။
တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းစွာ အသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် လက်နက်ကိုင်စစ်တပ်တွေအတွက် အခြေအနေကောင်းတွေက ဘာလို ဖြစ်သလဲ ဆရာ။
ဥပမာအားဖြင့် ၁၉၈၈ ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အရှေ့တောင်အာရှက အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေမှာ လူထုအုံကြွမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြတုန်းက ဖိလစ်ပိုင်တို့၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့မှာ ရှိတဲ့ စစ်တပ်တွေ၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက နိုင်ငံရဲ့ အပြောင်းအလဲအတွက် ရပ်တည်ခဲ့ကြပုံတွေ၊ ပြည်သူလူထုကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာတွေကို ပြန်ကြည့်စေချင်တယ်။ လက်နက်ကိုင်စစ်တပ်ဟာ ဒီမိုကရေစီရေး အပြောင်းအလဲအတွက် တစုံတရာသော ပံ့ပိုးခြင်း၊ ပါဝင်ခြင်းတို့ကြောင့် အခြေအနေကောင်းတွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
အခု အီဂျစ်ပြည်သူလူထုရဲ့ သန်းနဲ့ချီတဲ့ အုံကြွမှုမှာ ဆိုရင် ၁၄ ရက် ကျော်လာပြီ။ အာဏာရပါတီနဲ့ အစိုးရဖက်က အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်လာတယ်။ ညှိနှိုင်းမှုတွေ လုပ်လာတယ်။ လူထုကလည်း မကျေနပ်နိုင်သေးဘူး။ တင်းမာနေဆဲပဲ။ နိုင်ငံရေးအရ ရွေးကောက်ပွဲအသစ်လုပ်ဖို့၊ စုံစမ်းစစ်ဆေး အရေးယူဖို့၊ အစိုးရအဖွဲ့ ပြောင်းလဲဖို့၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့် ရှိဖို့၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့တွေ စေ့စပ်ပြောဆို ကမ်းလှမ်းလာတာတွေ တွေ့ရတယ်။ အဲသည်မှာ လက်နက်ကိုင်စစ်တပ်က လက်ရှိအာဏာရှင်တွေဖက်ကလည်း မလိုက်ဘူး။ ပြည်သူလူထုကိ်ုလည်း အကြမ်းဖက်ပြီး သတ်ဖြတ်နှိမ်နှင်းတာတွေ မလုပ်ဘူး။ ဒါမျိုး ရပ်တည်နေတယ်။ ဒါဟာ အခြေအနေကောင်းတခုလို့ ဆိုချင်တယ်။
မြန်မာပြည်မှာက လက်နက်ကိုင်စစ်တပ်က ဘယ်လမ်းကို ရွေးမှာလဲ ဆရာ။
၁၉၈၈ မှာ စစ်တပ်ဟာ အာဏာရှင်တွေ စေခိုင်းသလို လူထုကို အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။ ၂၀၀၇ မှာတုန်းကလည်း စစ်တပ်ဟာ အာဏာရှင်တွေအလိုကျ သံဃာတော်တွေအပါအ၀င် လူငယ်တွေ၊ ပြည်သူတွေကို နှိမ်နှင်းခဲ့တယ်။ သို့သော် ဖိလစ်ပိုင်က စစ်တပ်တွေလို ပြည်သူဖက်က လိုက်မှာလား။ ဒါမှမဟုတ် အီဂျစ်စစ်တပ်လို ကြားနေမှာလား။ ဒါကို တပ်မတော်သားတွေက ရွေးချယ်ကြရတော့မှာဖြစ်တယ်။ အကယ်၍များ မြန်မာပြည်သူလူထုဟာ ဆင်းရဲကြပ်တည်းလွန်းလို့၊ တရားမျှတလွတ်လပ်မှု မရှိလို့ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး ဆူပူအုံကြွမှုတွေ မလွှဲမရှောင်သာ ဖြစ်ကြရမယ်ဆိုရင် တပ်မတော်ဟာ လက်ရှိအခြေအနေမှာ အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းမယ်၊ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ဦးမယ် ဆိုရင် မြန်မာပြည်ကြီးနဲ့ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးဟာ ဆင်းရဲတွင်း ဘေးဒုက္ခမျိူးစုံကနေ လွတ်မြောက်ခြင်းမရှိဘဲ ဒီထက်ပိုပြီး နစ်သည်ထက် နစ်ကြဦးမယ် ဖြစ်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ပြည်ပက လူုပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ မိတ်ဆွေတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ပန်ကြားချင်တာကတော့ နိုင်ငံတကာက တိုင်းပြည်အသီးသီးက လက်နက်ကိုင် တပ်မတော်တွေရဲ့ တိုင်းပြည်ကောင်းကျိူးအတွက် ရပ်တည်မှုတွေ၊ ထိန်းသိမ်းမှုတွေ၊ ဆောင်ရွက်မှုတွေ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်မှုတွေ၊ လူထုအကျိူးအတွက် အကာအကွယ်ပေးတာတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ဖော်ထုတ်ပြောဆိုပေးကြပါ။ ဆွေးနွေးပြန်ကြားပေးကြပါလို့ ပြောပေးကြပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ ဆရာပြောတဲ့သဘောက လက်နက်ကိုင်စစ်တပ်တွေက ပြည်သူလူထုကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ဖို့ အရေးပါတယ်။ လိုအပ်တယ် လို့ ပြောသွားတယ်။ အဲသည်မှာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အကြပ်အတည်းတွေ၊ အခက်အခဲတွေကို အဖြေရှာဖို့ ဆွေးနွေးဖြေရှင်းဖို့ဆိုတာက တိုင်းပြည်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ အတိုက်အခံတွေ၊ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တယ် ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့နော်။ အီဂျစ်ပြည်မှာဆိုရင် အာဏာရပါတီတွေ၊ အာဏာရှင်တွေနဲ့ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာကြဖို့ နိုင်ငံတကာက တိုက်တွန်းကြတယ်။ ပြည်သူလူထုရဲ့ လတ်တလော စားဝတ်နေရေးပြသနာတွေကို လက်ရှိအာဏာရအစိုးရက ချက်ခြင်း အရေးယူဖြေရှင်းပေးဖို့လည်း ၀ိုင်းပြောနေကြတယ်။ မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ကော အဲသည်လို အခြေအနေမျိူး ရှိသလား။
အီဂျစ်နိုင်ငံက လူထုအုံကြွမှုတွေမှာ မျိူးဆက်သစ်လူငယ်တွေက တယောက်တလက် ဦးဆောင်ပြီး ဆောင်ရွက်ကြတာ ဖြစ်တယ်။ လူထုအုံကြွမှုဖြစ်ပွားင်္ပြီးတော့မှ အရှိန်ရလာတော့မှသာ ဟိုက ဒီက အတိုက်အခံအင်အားတွေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပေါ်ထွက်လာတာမျိူး တွေ့ရတာ ဖြစ်တယ်။ ဥပမာ မွတ်စလင်ဘရားသားဟုဒ်ဆိုတဲ့ အဖွဲ့တို့၊ ကုလသမဂ္ဂ ညူကလီးယားအေဂျင်စီမှာ ဦးဆောင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အယ်လ်ဘာရာဒေးတို့ ပေါ်ထွက်လာတယ်။ ဆိုလိုတာက သူတို့ဆီမှာ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေ ခေါင်းဆောင်သူတွေကို အီဂျစ်ပြည်သူတွေက မျက်ခြေပြတ်သွားခဲ့တဲ့ အချိန် ရှိတယ်။
ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်အနေနဲ့ကတော့ ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံကနေပြီးတော့ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အင်န်အယ်ဒီပါတီ၊ မဟာမိတ်ပါတီတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ စီအာရ်ပီပီလို့ ခေါ်တဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြု ကော်မီတီ စတဲ့ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေက တောက်လျောက် ရှိနေတယ်။ ရပ်တည်နေတယ်။ တိုင်းရင်းသားပါတီင်္ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်း ပါဝင်လျက်ရှိနေတယ်။ သူတို့တတွေက တိုင်းပြည်ရဲ့ အရေးပေါ်အခြေအနေတရပ် ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေ အဖြစ်နဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ အဆင်သင့် ရင်ဆိုင်နိုင်ရမယ် လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် မြန်မာပြည်သူလူထုတွေကကော အခုအချိန်မှာ အင်န်အယ်ဒီတို့ စီအာရ်ပီပီတို့ရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူ ထောက်ခံရပ်တည်မှုတွေ ပြသတာ၊ လှုပ်ရှားတာတွေကော ရှိနေလို့လား ဆရာ။
အပေါ်ယံအနေနဲ့ ကြည့်ရင်တော့ မြန်မာပြည်က ပြည်သူလူထုက ငြိမ်သက်နေတယ်လို့ ပြောရမယ် ထင်တယ်။ စစ်အစိုးရဖက်ကပြောရင်တော့လည်း သူတို့ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုတွေကြောင့် တိုင်းပြည်ဟာ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားနေတယ်လို့ ပြောချင်လည်း ပြောမှာပဲ။ ဒါဟာ လူထုက သူတို့ကို ထောက်ခံတယ်လို့ တဖက်သပ် ကောက်ချက်ဆွဲလို့ မရဘူး။ လူထုဟာ ခုချိန်မှာ စားဝတ်နေရေး ပြသနာပေါင်းစုံ ဖိဆီးနေလို့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဖက်ကို မလှည့်လာနိုင်သေးဘူး ဖြစ်နေတယ်။ နောက် ဦးကြည်မောင် ပြောခဲ့တဲ့ စကားကို ကိုးကားပြီးပြောရရင် လူထုဟာ နိုင်ငံရေးသားကြောပြတ်နေတဲ့ သဘောပဲ။
နိုင်ငံရေး နိုးကြားအောင်၊ ဗဟုသုတတွေ ရှိအောင်၊ ဆွေးနွေးဖလှယ်ခွင့်ရအောင်၊ အမြင်ကျယ်အောင် လုပ်ခွင့်၊ ဖတ်ခွင့်၊ ပြောဆိုခွင့် အခြေအနေတွေလည်း စစ်အစိုးရလက်အောက်မှာ ခုထိ ဘာမှ မရှိသေးဘူး။ သို့သော်လည်းပဲ သူတို့က လူထုက ငြိမ်ဝပ်ပိပြားနေအောင် ဘယ်လိုပဲ လုပ်ထား လုပ်ထား ကျေးလက်တောရွာ တွေအထိ လူကိုယ်တိုင် သွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်သူတွေဟာ အခုလိုမျိူး ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတာကို မလိုလားဘူး။ အဲသည်လို မတရားဖိနှိပ်ခံထားရတာကို မကြိုက်ဘူး။ သည်တော့ အခုလက်ရှိ စစ်အစိုးရတွေ အပေါင်းအပါတွေကို မထောက်ခံဘူး။ ဒါကို တွေ့ကြရမှာ ဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် တိုင်းပြည်ရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်လာပြီ ဆိုတဲ့အခါက နေရာဒေသအသီးသီးက ပြည်သူတွေဟာ တခဲနက်တည်း မတိုင်ပင်၊ မဖိတ်ခေါ်ရဘဲနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီမှာ လာရောက် စုဝေးကြတာတွေ၊ ထောက်ခံမှု ပြကြတာတွေကို တွေ့ကြရတာ ဖြစ်တယ်။ ဒါတွေကို ကြည့်ရင် စစ်အစိုးရကို အယုံအကြည်မရှိဘူး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေကို ထောက်ခံတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာ ပြည်သူလူထုကို အချိန်တိုင်း မတွေ့ရတာကတော့ ပြည်သူလူထုဟာ နေ့တဓူဝ အိမ်ရှိ် လူအကုန် ထွက်ပြီး စားဝတ်နေရေးအတွက် ရုန်းကန်နေရတယ်။ လူပိုမရှိအောင် ပင်ပင်ပန်းပန်း အလုပ်ဆင်းနေကြရတယ်။ သူတို့တတွေဟာ လက်ရှိစစ်အာဏာရှင်တွေလက်အောက်မှာ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်ပြီး လုပ်နေကြတာ မဟုတ်ဘူး။ မြန်မာပြည်သူလူထုတွေဟာ အင်န်အယ်ဒီင်္တို့ စီအာရ်ပီပီတို့ စတဲ့ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးအင်အားတွေ၊ ၈၈ မျုိးဆက်တို့လို့ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်မျိူးဆက်တွေလိုမျိူး အမြဲတမ်း အားပေးထောက်ခံ ၀င်ရောက် လှုပ်ရှားလျက် ရှိနေတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်သူရဲ့ ၀န်းယံမှုတွေနဲ့ ကျနော်တို့တတွေဟာ တည်ရှိနေတယ်၊ ဆက်လက် ရှင်သန်နေတယ် ဆိုတာကို ထောက်ပြချင်တယ်။ အဲသည်လို ရပ်တည်နေကြတယ်လို့ ပြောချင်တယ်။
လူ့အခွင့်အရေး တိုးတက်မှုတွေ ရှိလာဖို့ ပိတ်ဆို့မှု ဆက်ထားရှိမည်
By ဦးသားညွန့်ဦး အင်္ဂါ, 08 ဖေဖော်ဝါရီ 2011
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းတွေဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် မဟုတ်ဘဲ အစိုးရရဲ့ မှားယွင်းတဲ့ မူဝါဒတွေကြောင့်သာ ဖြစ်တယ်လို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ထုတ်ပြန်လိုက်ချိန်မှာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကတော့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ဆက်လက် ထားရှိသွားမယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ အခုလို အရေးယူမှုတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အတွက် ရည်ရွယ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ ကိုသားညွန့်ဦးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အပြောင်းအလဲတွေ မယ်မယ်ရရ မတွေ့ရသေးတာကြောင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အနေနဲ့ နဂိုချမှတ်ထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အရေးယူ ဒဏ်ခတ်မှုတွေကို ရုတ်သိမ်းဖို့ မရှိသေးဘူးလို့ တုံ့ပြန်ခဲ့တာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ အရေးယူ ဒဏ်ခတ်မှုတွေကို ကြည့်ရင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက လက်ရှိ ချမှတ်ထားတာဟာ အပြင်းထန်ဆုံးလို့ ပြောရမှာပါ။
အထူးသဖြင့် စစ်အစိုးရ စစ်တပ် အကြီးအကဲတွေနဲ့ သူတို့ မိသားစုဝင်တွေ၊ သူတို့နဲ့ နီးစပ်တဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေကို ပစ်မှတ်ထားပြီး ငွေကြေးနဲ့ ခရီးသွားလာခွင့် ပိတ်ဆို့ အရေးယူထားတာတွေ ပိုပြီး ထိရောက်တယ်လို့ အတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု အတော်များများက ယူဆပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ မလုပ်ဖို့ တားမြစ်တဲ့ အရေးယူမှုဟာ မြန်မာလူထုကို ထိခိုက်စေသလို ပစ်မှတ်ထား အရေးယူမှုဟာလည်း ထင်သလောက် ထိရောက်မှု မရှိဘူးလို့ ဝေဖန်သံတွေလည်း အတော် ကျယ်လောင်ခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကတော့ မြန်မာ့စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းတွေဟာ ဒီ အရေးယူ ဒဏ်ခတ်မှုတွေကြောင့် မဟုတ်ဘဲ စစ်အစိုးရ ကိုယ်တိုင်ရဲ့ မူဝါဒ လမ်းညွှန်မှုတွေကြောင့်သာ ဖြစ်တယ်လို့ အပြစ်တင်ပါတယ်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အနေနဲ့တော့ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာအောင် ဖိအားပေးဖို့ အရေးယူမှုတွေကို ဆက်ထားရှိမှာ ဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာန အရာရှိတဦးက ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းကို ပြောပါတယ်။
“မြန်မာအာဏာပိုင်တွေ အနေနဲ့ ထင်သာမြင်သာတဲ့ အရေးယူ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ ဖိအားပေးတဲ့ အနေနဲ့ ဒီ အရေးယူ ဒဏ်ခတ်မှုတွေကို ဆက်ထားရှိပါမယ်။ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အတွက် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးဖို့၊ အတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ၊ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေ လုပ်ဖို့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတို့က လိုလားပါတယ်။”
ဒါပေမဲ့လည်း အရေးယူမှုကြောင့် လူထုကို ဘယ်လောက် ထိခိုက်စေသလဲ ဆိုတာတွေကိုလည်း အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အနေနဲ့ မပြတ် အမြဲတမ်း လေ့လာနေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
“ပိတ်ဆို့အရေးယူ ဒဏ်ခတ်မှုဟာ ဘယ်လောက်အထိ ထိရောက်သလဲ ဆိုတာနဲ့ ဘယ်လောက်အထိ ထိခိုက်စေသလဲ ဆိုတာတွေကို ဒီမိုကရေစီ အတိုက်အခံ အုပ်စုတွေ၊ တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေနဲ့ ပုံမှန်မပြတ် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှု ရှိပါတယ်။”
တကယ်တော့ လွှတ်တော်တွင်း ၀င်ရောက်တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ အတော်များများ၊ ကိုယ်စားလှယ် အတော်များများက စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ပြန်လည်စဉ်းစားဖို့ ပန်ကြားထားတာပါ။
USCB အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ အမှုဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး ကိုအောင်ဒင်ကတော့ တိုင်းပြည် စီးပွားရေး ပြဿနာကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု တခုတည်းကို ဇောင်းပေးပြောဆိုနေတာ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ဝေဖန်ပါတယ်။
“တကယ့် တိုင်းပြည်ရဲ့ ပြဿနာတွေကို သေချာစဉ်းစား သုံးသပ်ပြီး မှန်မှန်ကန်ကန် ဆုံးဖြတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ တကယ်ကိုပဲ လူထုအကျိုးစီးပွား ဦးစားပေးကြမယ်ဆိုရင်၊ လက်ရှိကာလမှာ နအဖ စစ်အုပ်စုရဲ့ မတရားသဖြင့် အာဏာကို သိမ်းပိုက်ထားမှုတွေ၊ မမျှမတ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေ၊ ကိုယ်ကျိုးရှာမှုတွေ၊ လာဘ်စားမှုတွေ စသဖြင့်ပေါ့၊ အလွဲသုံးစား လုပ်မှုတွေ၊ မှန်ကန်တဲ့ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေ မရှိတာ၊ ဒါတွေအားလုံးက တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး ချွတ်ခြုံကျမှုကို ဦးဆောင်နေတာပါ။
“တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး ပြဿနာကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် Sanction ကို အဓိကထား ကြည့်ရမယ့်အစား ပြည်တွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မတရားမှုတွေ၊ ပြဿနာတွေကို အရင်ဆုံး အဖြေရှာရမှာပါ။ အဲဒီလို အဖြေရှာဖို့အတွက် သူတို့ကိုယ်နှိုက်က နအဖစစ်အုပ်စုကိုရော၊ အခုတက်လာမယ့် ပုံသဏ္ဌာန် ပြောင်းသွားမယ့် အစိုးရသစ်ကိုရော ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန် ထောက်ပြဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီလို ပြည်တွင်းမှာတော့ တကယ်တမ်း တာဝန်ရှိတဲ့ စစ်အုပ်စုကို တိုက်ရိုက် မပြောရဲဘဲနဲ့ နိုင်ငံတကာ Sanction တွေကို လာပြီး ဦးစားပေးနေမယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ လူထုအပေါ် သစ္စာရှိတယ်၊ ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်အလက်တွေကတော့ အင်မတန် သံသယရှိစရာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။”
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ မနေ့က ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ အရေးယူ ဒဏ်ခတ်မှုရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုတွေကို လေ့လာသုံးသပ်ရာမှာ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ဝေဖန်တာတွေဟာ တိုင်းပြည်အတွင်း လတ်တလော ဖြစ်နေတဲ့ အဓိက ပြဿနာရပ်တွေကနေ အာရုံလွှဲမှု ဖြစ်စေတယ်လို့ သုံးသပ်ပါတယ်။ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုတွေဟာ တောင်းဆိုချက်တွေကြောင့် မဟုတ်ဘဲ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတွေရဲ့ စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ချက်သာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ထောက်ပြသလို အဲဒီနိုင်ငံတွေက စိုးရိမ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ပြဿနာရပ်တွေကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းခြင်းကသာ ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ဖယ်ရှားနိုင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေ အတွက်လည်း စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု လုပ်ထားတဲ့ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ဖို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က အာဏာပိုင်တွေကို တောင်းဆိုထားပါတယ်။
မြန်မာကို ပိတ်ဆို့မှု အမေရိကန်နဲ့ ကနေဒါ ရုပ်သိမ်းဖို့ အစီအစဉ်မရှိ
By ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန) အင်္ဂါ, 08 ဖေဖော်ဝါရီ 2011
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို ရှေ့ရှုပြီး စစ်အစိုးရက လူ့အခွင့်အရေး လေးစား လိုက်နာရေး၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အားလုံး လွှတ်ပေးရေး၊ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ၊ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အနှစ်သာရရှိတဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေအတွက် အခိုင်အမာ အရေးယူ ဆောင်ရွက်တာတွေ လုပ်လာအောင် တွန်းအားပေးတဲ့ အနေနဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက တားဆီး ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ဆက်လက် ထိန်းထားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက ဒီနေ့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေး ချွတ်ခြုံကျနေရတာဟာ လူ့အခွင့်အရေး အကြီးအကျယ် ချိုးဖောက်နေတဲ့ စစ်အစိုးရ အပေါ်မှာ အခိုင်အမာ မူတည်နေတယ် ဆိုတာကို ကနေဒါ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက သဘောတူတဲ့အကြောင်း မနေ့က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ကနေဒါနိုင်ငံက စစ်အစိုးရအပေါ် အပြင်းထန်ဆုံး ဒဏ်ခတ်ထားတာကို ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ အစီအစဉ် မရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လွတ်မြောက်ရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး လေးစား လိုက်နာရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးတွေ ဖြစ်ထွန်း တိုးတက်အောင် နိုင်ငံတကာ မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူ ဘယ်လို ကူညီနိုင်မလဲ ဆိုတာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ NLD အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ တခြား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေနဲ့ ဆွေးနွေးမယ့် အစီအစဉ်ကို ကြိုဆိုပါကြောင်း ကနေဒါ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာသုံးသပ်ချက် တစောင်ကို အင်္ဂါနေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အပေါ် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက အခုလို မှတ်ချက်ပေးလိုက်တာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်တွေကို ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုအခြေအနေတွေ အောက်ကနေပြီး ပြုပြင် မွမ်းမံနိုင်မယ် ဆိုတာကို သဘောတူညီမှု ရရှိနိုင်အောင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ EU ဥရောပသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများ၊ ကနေဒါ၊ နယူးဇီလန်နဲ့ သြစတြေးလျ နိုင်ငံတို့ကို ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးသွားဖို့အတွက် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က တောင်းဆိုမယ်လို့ သူတို့ရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီလိုစဉ်းစားရာမှာ ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ တောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့ စီးပွားရေး အခြေအနေတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ လိုအပ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
အများရဲ့ လေးစားမှုကို ခံယူရရှိပြီးဖြစ်တဲ့ ပညာရှင်အဖွဲ့ တခုကနေ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုတွေရဲ့ အကျိုးအပြစ်တွေကို လေ့လာ ဆန်းစစ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် အဲဒီဆွေးနွေးမှုတွေဟာ အများကြီး အထောက်အကူပြု၊ အကျိုးဖြစ်စေမယ်လို့ NLD ရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ (USCB) ကလည်း စစ်အစိုးရအပေါ် တားဆီး ပိတ်ဆို့မှုတွေကို အပြည့်အ၀ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လိုနေသေးကြောင်း စစ်အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံခြားငွေ ဘဏ်စာရင်းတွေကို ပိုပြီး ထောက်လှမ်းရင်းနဲ့ ချိတ်ပိတ်ဖို့ ဆက်လုပ်ဖို့ လိုအပ်နေသေးတယ်လို့ ဗွီအိုအေကို ပြောပြပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ Burma Campaign (UK) ဗြိတိန်နိုင်ငံ မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့ကလည်း EU ဥရောပသမဂ္ဂ အနေနဲ့ ဧပြီလမှာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးမယ့် စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပေါ် ပစ်မှတ်ထားပြီး ဒဏ်ခတ်တာတွေကို သက်တမ်းတိုးပြီး ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားသင့်တယ်လို့ မနေ့က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
စီးပွားရေးပြဿနာ အုပ်ချုပ်မှုကြောင့်လို့ NLD ပြော
By ဦးကျော်ကျော်သိန်း အင်္ဂါ, 08 ဖေဖော်ဝါရီ 2011
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုတွေဟာ ပြည်သူလူထု အများစုကြီးကို မထိခိုက်ဘဲ လူနည်းစုကိုသာ ထိခိုက်တာဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည်မှာ စီးပွားရေးအရ အကျပ်အတည်း ကြုံတွေ့နေရတဲ့ တကယ့်အဖြစ်မှန်ကတော့ Good Governance လို့ ဆိုတဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး မရှိတာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) က ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှု ချမှတ်ထားတဲ့ နိုင်ငံတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ကိုလည်း NLD က နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဘန်ကောက်ကနေ ကိုကျော်ကျော်သိန်းက သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
ဒီအရေးယူမှုတွေဟာ ပြည်သူလူထုကို တကယ်တမ်း ထိခိုက်မှု ရှိ မရှိ လေ့လာသုံးသပ်တာတွေ လုပ်သွားမယ်ဆိုပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်ကလည်း ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီလို လေ့လာသုံးသပ်တာတွေကို အချိန်ယူ လုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ ဒဏ်ခတ် အရေးယူမှုတွေအပေါ် NLD ရဲ့ တရားဝင် သဘောထား ထွက်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
“ဒီနေ့ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မရှိရခြင်းနဲ့ အကျပ်အတည်းတွေ ကြုံတွေ့နေရခြင်းဟာ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် မဟုတ်ဘူး။ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် ထိခိုက်တယ် ဆိုရင်လည်း အများစု ပြည်သူလူထုကြီးကို နစ်နစ်နာနာ မထိခိုက်ဘဲ တချို့ အသိုင်းအ၀ိုင်းကိုပဲ အနည်းအကျဉ်း ထိခိုက်မှုတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ ဖော်ပြတယ်။
“တကယ့်တကယ် စီးပွားရေး တိုးတက်မှု နှေးကွေးရခြင်း၊ စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းတွေ ကြုံတွေ့ရခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းကတော့ အစိုးရရဲ့ စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ဖျင်းခြင်းနဲ့ စီးပွားရေးမှာ လွတ်လပ်ခွင့်၊ တရားမျှတခွင့်၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုတွေ ဒီနယ်ပယ်မှာလည်း မရှိတာကြောင့် ဖြစ်တယ်။ Good Governance မဟုတ်တာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်တို့ သုံးသပ်ပါတယ်။”
NLD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးအုန်းကြိုင် ပြောပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုတွေရဲ့ သက်ရောက်မှု၊ ထိခိုက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး NLD ကိုယ်တိုင်ကလည်း လက်တွေ့ လေ့လာခဲ့သလို စီးပွားရေး ပညာရှင် အသီးသီး၊ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးရဲ့ လေ့လာ သုံးသပ်ချက်တွေကိုလည်း သေသေချာချာ ဆန်းစစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ ဦးအုန်းကြိုင်က ပြောပါတယ်။
ဒဏ်ခတ် အရေုးယူမှုတွေကို ချမှတ်ထားတဲ့ အမေရိကန် အပါအ၀င် အနောက်နိုင်ငံတွေ ပြောတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင် လုပ်ဖို့၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးပြီး စစ်မှန်တဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်ဖို့၊ ဒီမိုကရေစီရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ အရှိန်မြှင့်လုပ်ဖို့ ဖိအားပေးတဲ့ အနေနဲ့ အရေးယူမှုတွေကို ချမှတ်ထားတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ စီးပွားရေးဝန်းကျင်တို့ ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက် ဘယ်အချိန်မှာ၊ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ဘယ်လို အခြေအနေမျိုး အောက်မှာ ဒဏ်ခတ် အရေးယူမှုတွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ခြေ ရှိမယ်ဆိုတဲ့အပေါ် သဘောတူညီချက်တရပ် ရနိုင်ရေးဆိုတဲ့ အမြင်နဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျ နိုင်ငံတို့နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့အတွက် NLD က တောင်းဆိုထားပါတယ်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပါတီစုံ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကျင်းပခဲ့ပြီး လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေ ကျင်းပနေ၊ အစိုးရအဖွဲ့တရပ် ပေါ်လာဖို့ အခြေအနေ ရှိနေတယ် ဆိုပေမဲ့ တကယ်တမ်းကျတော့ အများပါဝင် ပတ်သက်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်တရပ် ပေါ်ပေါက်လာဖို့ ဘယ်လိုအရိပ်လက္ခဏာမျိုးမှ မတွေ့ရသေးဘူး၊ ဒါကြောင့် ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှု ရုပ်သိမ်းဖို့ အဓိက ဘာလုပ်သင့်တယ် ဆိုတဲ့အပေါ် NLD ရဲ့ သဘောထားကို ဦးအုန်းကြိုင်က အခုလို ပြောပါတယ်။
“အခုချိန်မှာ အများပါဝင် ပတ်သက်တဲ့ နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်ကြီးတရပ် ပေါ်ပေါက်လာရေးကို အရေးတကြီး တောင်းဆိုဖို့တောင်မှ လိုအပ်နေတဲ့ အနေအထားတွေ တွေ့နေရတယ်။ အဲဒီတော့ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုတွေ ရုပ်ဖို့ ဆိုရင်လည်း စောစောက ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ တွန်းအားပေးတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို အကောင်အထည် ဖော်ပြီးတော့ လွတ်လပ် ပွင့်လင်းတဲ့ နိုင်ငံရေးပုံစံတခု ပေါ်အောင် ကြိုးပမ်းခြင်းသာလျှင်၊ အဲဒီအပေါ်မှာသာလျှင် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုတွေ ရုပ်သိမ်းဖို့၊ ကင်းလွတ်ဖို့ ဆိုတာဟာ အဓိက မူတည်နေတယ်လို့ ကျနော်တို့ ပြောလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။”
ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး NLD ဘက်က အခုလို သဘောထား ရှိပေမဲ့ NLD ကနေ ခွဲထွက်သွားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တချို့ ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု (NDF) ပါတီကတော့ ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆိုင်ရာတွေကို ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ် အရေးယူထားတာ ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းကပဲ တောင်းဆိုထားပါတယ်။ လူနည်းစုကို ဦးတည်ချမှတ်ထားတဲ့ ဒဏ်ခတ် အရေးယူမှုတွေဟာ ပြည်သူအများကို ထိခိုက်တာတွေ ရှိလာတယ်လို့ NDF က သုံးသပ်ပါတယ်။
“ဥပမာ သစ်ထုတ်လုပ်ရေးပဲ ကြည့်ပါ။ သစ်ထုတ်လုပ်ရေးသာ ရှိနေမယ်ဆိုရင် သစ်တောအစပ်မှာရှိတဲ့ ရွာတွေအထိ သစ်ခွဲစက်ကလေးတွေ ထောင်ပြီး လူတွေဟာ အလုပ်အကိုင်တွေကို လုပ်ကိုင်လာနိုင်မယ့် အနေအထားတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကုန်သွယ်ရေးမှာ ပိတ်ဆို့မှု ဖြစ်ပြီးတော့ သစ်တွေကို မပို့ရဘူး၊ တိုက်ရိုက်မပို့ရဘူး၊ တဆင့်ခံ ပို့ရမယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်မှာ ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံတွေက ဈေးကွက်ကြီးနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိစပ်မှု မရှိတဲ့အတွက် အောက်ဈေးနဲ့ပဲ ရောင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
“အဲတော့ တိုင်းပြည်နစ်နာရင် ပြည်သူနစ်နာတာပဲ။ ဒါကြောင့် ပြည်သူတွေကို မထိခိုက်ဘူး ဆိုတာကတော့ ကျနော်တို့ မယုံကြည်ပါဘူး။ ပြည်သူကို ထိခိုက်တဲ့ နေရာတွေဟာ ကုန်သွယ်မှု အပိုင်းမှာ ပါသလို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အပိုင်းမှာလည်း ပါနေတဲ့အတွက် အသေးစား၊ အလတ်စား စက်မှုလုပ်ငန်းတွေကို တကယ်လို့ ဖွံ့ဖြိုးစေချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ ကုန်သွယ်မှု ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ဖယ်ရှားပေးဖို့ အင်မတန်မှ အရေးကြီးပါတယ်လို့ ကျနော်တို့ ယူဆပါတယ်။”
NDF ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်ဆွေ ပြောပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှု ကိစ္စဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ အပြောအဆို အများဆုံး ကိစ္စတရပ်ဖြစ်ပြီး သဘောထား ကွဲပြားမှု အရှိဆုံး ကိစ္စတခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာလည်း အရေးယူမလား၊ ထိတွေ့ဆက်ဆံမလား ဆိုတဲ့အပေါ် ခုချိန်ထိ တူညီတဲ့ သဘောထား မရှိသလို အရေးယူတဲ့ နေရာမှာလည်း အဆင့်အမျိုးမျိုး၊ ပုံသဏ္ဌာန် အမျိုးမျိုးနဲ့ အကွဲကွဲ အပြားပြား ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြယ်လည်း မပေါက်ကွဲနိုင်၊ နေနှစ်စင်းလည်း ပေါ်ထွန်းမလာနိုင်ပါ
လက်ရှိသတင်းတွေအရ သိပ္ပံပညာရှင် ဆိုသူတွေက ၂၀၁၂ မှာ Betelgeuse ကြယ်နီကြီးက ပေါက်ကွဲပြီး ကမ္ဘာထက် ဆယ်ဆ လောက်မက ရှိတဲ့ ကြယ်ပေါက်ကွဲမှုကြီးရဲ့ အပိုင်း ပြတ်တစ်ခုက ကမ္ဘာအတွက် ဒုတိယ နေ၀န်းတစ်ခု ဖြစ်လာပြီး နေ၀န်းသစ် တစ်ခု ပေါ်ထွန်းလာမယ်လို့ ဆိုထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အသိပညာ အလင်းမီးပြတိုက်ကနေ မီးမောင်းထိုးလို့ ကြည့်ကြပါစို့။
၁. ပေါက်ကွဲမယ် ဆိုတဲ့ ကြယ်ရဲ့ အပိုင်းအစ တစ်ခုက အလင်းနှစ်ပေါင်း ၆၄၀ ကျော် ဝေးတဲ့ နေစကြာဝဋ္ဌာ တစ်ခုဆီကနေ ဒီကမ္ဘာကြီးဆီ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ဘယ်လိုများ လိပ်စာ အတိအကျ တပ်ပြီး ရောက်လာမှာလဲ ?
၂. 2012 မှာ ပေါက်ကွဲတယ်ပဲ ထားပါလေ အဲဒီကြယ်ရဲ့ ပေါက်ကွဲ အပိုင်းအစကြီးက ဘယ်လို အလျင်နှုန်း မျိုးနဲ့ ဒီလောက် အလင်းနှစ်ပေါင်း ၆၄၀ ကျော် ခရီးကို နှစ်ပိုင်း လပိုင်းအတွင်း ရောက်လာ နိုင်မှာလဲ ?
၃. Betelgeuse ကြယ်ကြီးဆီကနေ ပေါက်ကွဲတဲ့ အပိုင်းအစကြီးက အလင်းရဲ့ အလျင်နှုန်း light speed အရှိန်အဟုန်နဲ့ လာရင်တောင် ကမ္ဘာနားဆီရောက်ဖို့ အနည်းဆုံး နှစ်ပေါင်း 640 ကျော်ကြာမှ ရောက်လာ နိုင်တာမျိုးပါ။ ဒါတောင် မသေချာပါဘူး၊
ပေါက်ကွဲမည်ဆိုသော ၄င်း (Betelgeuse ) ကြယ်ဟာ ကောင်းကင်းမှာ အဌမမြောက် အတောက်အပဆုံး ကြယ်တစ်ပွင့် ဖြစ်ပြီး အနောက်တိုင်းအရ Constellation Alpha Orionis ( RA , 05hr 55min 10.3 sc.) Declination = (+7ံ, 24’ , 25” ) အရှေ့တိုင်း နက္ခတ်ဗေဒင် Sidereal Longitude အရကတော့ မေထုံရာသီ အဒြနက္ခတ်ပိုင် ( ၆၄ ဒီဂရီ-၅၃ မီးနစ် ၅၁ စက္ကန့် ) မှာ တည်ရှိနေပါတယ်။ ၄င်း Betelgeuse ကြယ်မှာ ကမ္ဘာမြေနှင့် လတ်တလော 2012 မှာတော့ အလင်းနှစ်ပေါင်း 640 လောက် အကွာဝေးမှာ ရှိနေပါတယ်။ ဒီတော့ 2012 ခုမှာ ထိုကြယ်ကြီး ပေါက်ကွဲပြီး ကမ္ဘာမြေဆီသို့ နေ၀န်းနီ အသစ်တစ်လုံး အဖြစ် ချက်ချင်းပင် ရောက်ရှိလာလို့ ကမ္ဘာနှင့်အနီးမှာ နေ၀န်းသစ်တစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ထွန်းလာနိုင်စရာ အဘယ်မှာ ဖြစ်နိုင်စရာရှိမည်နည်။?
ဒါပေမဲ့ ဒါကို မဟုတ်ရပါဘူးလို့ ငြင်းဆိုထားတဲ့ ပညာရှင်တွေကလည်း ရှိနေကြသလို တချို့ကတော့ ဒီကြယ်ကြီးဟာ တနေ့နေ့မှာတော့ ပေါက်ကွဲသွားလိမ့်မယ်လို့သာ ဆိုထားတာပါလို့ ပြောကြတာတွေလည်း ရှိနေပါသည်။ ယနေ့ အာကာသ သိပ္ပံရဲ့ ဧကရာဇ် ဖြစ်တဲ့ NASA ကတော့ ဒီလို 2012 မှာ ကြယ်ကြီး ပေါက်ကွဲပြီး နေ၀န်းတစ်ခု တိုးလာလိမ့်မယ်လို့လည်း လုံးဝ ပြောမထားခဲ့ပါဘူး၊ တကယ်တော့ ဒါဟာMayan Calendar မာယာပြက္ခဒိန်က ဟောကိန်း တွေသာ ဖြစ်သလို တချို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေက အဲဒီမာယာပြက္ခဒိန် နောက်ကို မျောပါနေသူတွေလည်း ရှိနေကြသလို သိပ္ပံပညာရှင်များ ပြောမှ ယုံကြည် တတ်ကြသော ဤသိပ္ပံလောကသားတို့အတွက် တချို့ ထုတ်လုပ်သူများက မိမိတို့ စာအုပ်-ရုပ်ရှင် Video များ ပေါက်ရန် ဈေးကွက် ၀င်ရန် သိပ္ပံပညာရှင်အချို့ကို အိတ်ကပ်ထဲ ထည့်ကာ မိမိတို့ စီးပွားအတွက် ဤမည်သော သတင်းမျိုး များကို ဖန်တီးရယူ နေတတ်ကြတာမျိုးလည်း မကြာမကြာ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ သို့ဖြစ်၍သာ NASA ကလည်း ဆန်စင်ရာ ကျည်ပွေ့မလိုက် ဆိုသလို ကောလာဟလများ နောက်ကို လိုက်ပြီး ဖြေရှင်း မနေတော့ပေ။
သို့ပေမယ့် စာရေးသူအနေနဲ့တော့ စာဖတ်ပရိတ်သတ် ပြည်သူတွေ ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေ အတွက် ဗဟုသုတ အလို့ငှာ လက်ခံယုံကြည်နိုင်တဲ့ အထောက်အထားလေး တစ်ခုလောက်နဲ့ပဲ ကြယ်ကြီးလဲ ၂၀၁၂ မှာ မပေါက်ကွဲနိုင်သလို ပေါက်ကွဲသည့်တိုင် နေ၀န်းနှစ်ခု ဖြစ်မလာနိုင်ကြောင်းကို တင်ပြပေးသွားပါမယ်။
Distance အကွာဝေးတိုင်းမှာ အချိန် Time line တွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒီတော့ တစ်နေရာတည်းကနေ သေနတ်တစ်လက်နဲ့ ကိုက် ၁၀၀ လောက်မှာ ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို သေနတ်နဲ့ ပစ်လိုက်လို့ သေနတ် ပြောင်းဝက ထွက်သွားတဲ့ ကျည်ဆန်က ထိုလူရဲ့ ရင်ဘတ်ကို ထိမှန်တဲ့ အချိန်နဲ့ ကိုက် ၅၀၀ လောက်မှာ ရှိနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ကို သေနတ် ကျည်ဆန် ထိမှန်တဲ့ အချိန်ချင်းက မတူနိုင်ဘဲ အချိန် ကွာဟမှု တွေက ရှိနေတတ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ မတူညီသော အကွာဝေးနှစ်ခု ကြားမှာ မတူညီသော အချိန်တွေက ရှိနေတတ်သလို၊ မတူညီသော အချိန်နှစ်ခုကြားမှာ မတူညီသော အကျိုး သက်ရောက်မှု တွေလည်း ရှိနေတတ်ပြန်ပါတယ်။
ဒီတော့ အလင်းဟာ တစ်စက္ကန့်မှာ မိုင်ပေါင်းတစ်သိန်းရှစ်သောင်းခြောက်ထောင်ကျော် (၁၈၆၀၀၀) အလျင်နှုန်း ရှိနေပါတယ်။ ဒီအလျင်နှုန်းနဲ့ တိုင်းတာပြီး တွက်ချက်ထားတဲ့ ကမ္ဘာမြေကနေ အနည်းဆုံး အလင်းနှစ်ပေါင်း ၆၄၀-မှ-၉၀၀ လောက် အကွာဝေးမှာ ရှိနေတဲ့ ကြယ်ရဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပေါ်ပါ့မယ် ဆိုတဲ့ ကြယ်ရဲ့ ပေါက်ကွဲမှုကြီးကနေ လွင့်စင်လာမယ့် နေ၀န်း အပိုင်းအစ တစ်ခုက အလင်းနှစ်ပေါင်း ၆၄၀ အကွာဝေးမှာ ရှိနေတဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ ကမ္ဘာကြီး၏ အနီးကို ၂၀၁၂ ခုအတွင်း ချက်ချင်းပဲ ရောက်လာ နိုင်မည်လော? တကယ်တော့ အလင်းထက်မြန်တဲ့ အရှိန်အဟုန်နဲ့ လွင့်စင်လာသည့်တိုင် ဘယ်လိုမှ အဲဒီပေါက်ကွဲတဲ့ နေ၀န်းရဲ့ အပိုင်းအစကြီး ဒီက နေစကြာဝဠာ အတွင်းသို့ ၂၀၁၂ မှာ ၀င်ရောက်လာ နိုင်စရာ မရှိသလို ၄င်း (Betelgeuse) ကြယ်ကြီးကလည်း သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတွေ ပြောသလို ၂၀၁၂ မှာ ဘယ်လိုမှ ပေါက်ကွဲ မသွားနိုင်သလို စကြာင်္ဝဋ္ဌာတစ်ခု သို့ မဟုတ် နေတစ်စင်းက ဘယ်တော့ ပေါက်ကွဲ ချုပ်ငြိမ်းသွားမည် ဆိုတာကိုလည်း ဘယ်လိုပညာရှင်ကမှ အတိအကျ နှစ်လရက်စွဲတပ်ပြီး ကြိုတင် တွက်ချက် ဟောကိန်း ထုတ်လို့လည်း မရနိုင်ပါဘူး။
နောက်တစ်ခုက တကယ်ပဲ ပေါက်ကွဲသည်ပဲ ထားပါ နေစကြာဝဋ္ဌာရဲ့ သဘာဝအရ လက်ရှိ နေမင်းဟာ သူ့ရဲ့ စွမ်းပကား Radius ပရ၀ုဏ်အတွင်းကို တခြားပြင်ပက Radiations တွေ Gamma- X-Rayလို ရောင်ခြည်တွေ ၀င်မလာအောင်လည်း သဘာဝက ကာကွယ်ပေးထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ် အစိုင်အခဲ ဖြစ်တဲ့ ဥက္ကာပျံကြယ်တံခွန်တွေက နေစကြာဝဋ္ဌာအတွင်းကို ၀င်ရောက် ဖြတ်သန်းရာမှာတောင် အချို့နေနဲ့ နီးသွားရင် နေက အဲဒီကြယ်တံခွန်ရဲ့ အလင်းတန်း အမြီးကို ရိုက်ချိုး ဖျက်စီး ပစ်တတ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု ဥပမာက ၂၀၀၀ ခုလောက်ဆီက ကြာသပတေးဂြိုဟ်သို့ ဥက္ကာပျံကြီးတစ်ခု ၀င်တိုက်စဉ်က အဲဒီဥက္ကာပျံကြီးဟာ ဂြိုဟ်နားကို နီးသွားတာနဲ့ အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာ ကြေပွပျက်စီးပြီးမှ ကြာသပတေးဂြိုဟ် ပေါ်သို့ ကျရောက်လာတာမျိုး ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ ယခု ပြောနေကြတဲ့ ကြယ်ရဲ့ ပေါက်ကွဲလို့ ကမ္ဘာထက် ဆယ်ဆမက ကြီးမားတဲ့ အပိုင်းအစကြီး ကလည်း အလင်းနှစ်ပေါင်း ၆၄၀ ဝေးလံတဲ့ ခရီးကြမ်းကြီးကို ဖြတ်သန်းလာနေစဉ်မှာ လမ်းမှာတင် ကြေမွှပျက်စီးပြီး ချုပ်ငြိမ်း သွားရမည်သာ ဖြစ်သလို ဤနေစကြာဝဋ္ဌာအတွင်းသို့ နေ၀န်းတစ်ခု အနေထားနဲ့ စွမ်းပကားအပြည့်ဝင်လာဖို့ ဆိုတာ ကလည်း လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
အသေချာဆုံးကို ပြောရရင်နေမှာ ပရမံအဏှုမြူရဲ့ အဓိကမဏ္ဍိုင် ဖြစ်တဲ့ Core အဏုမြူစံအိမ်ကြီး ပေါက်ကွဲ သွားပြီ ဆိုမှဖြင့် သူရဲ့ အဏုမြူ Radiation Zone ပါ ပျက်စီးသွားရမှာမို့ ကြယ် သို့ မဟုတ် နေတစ်စင်း ပေါက်ကွဲသွားပြီ ဆိုရင်ဖြင့် အနှေးနဲ့ အမြန် ချုပ်ငြိမ်းသွားစရာသာ ရှိသလို တနေနေရာမှာ သွားပြီး ဆက်လက် ရှင်သန်နေစရာ အကြောင်းမရှိ နိုင်တော့ပါဘူး။
အပြန်အလှန်အားဖြင့် နေတစ်စင်းသည် မိမိ၌ အဏုမြူမဏ္ဍိုင် Core သို့မဟုတ် အနုမြူစံအိမ်ကြီးတစ်ခု ရှိနေမှသာ နေတစင်း သို့မဟုတ် ကြယ်တပွင့်အဖြစ် ရပ်တည်နေနိုင်သလို ထိုအဏုမြူ Core မဏ္ဍိုင်တစ်ခု ပေါက်ကွဲ ပျက်စီးသွားလျင် သူ၏အဏုမြူ Radiation Zone တစ်ခုလည်း မရှိနိုင်တော့တာမို့ နေတစ်စင်း အဖြစ် ဆက်လက်ရှင်သန် ရပ်တည်နေနိုင်စရာ အကြောင်း လည်း မရှိနိုင်တော့ပေ။ သစ်တစ်ပင် အမြစ်ပြတ်သွားသလိုပင် ဖြစ်သည်။
သည်သို့ ဆိုသော် ဖေါ်ပြပါသတင်းများ အတိုင်း Betelgeuse ကြယ်နီကြီးက ပေါက်ကွဲပျက်စီးသွားမည် ဆိုပါကလည်း ၄င်း၏ အဏုမြူ မဏ္ဍိုင် Core စံအိမ်ကြီးပါ ပေါက်ကွဲ ပျက်စီးသွားခြင်းသာ ဖြစ်တာမို့ ၄င်းမှ ပေါက်ကွဲလာသော အပိုင်းအစကြီးများက စွမ်းပကား ရှိတဲ့ နေ၀န်းတစ်စင်းနှယ် အဘယ်မှာ လာရပ်တည်နေ နိုင်တော့မည်နည်း? လွင့်စင်လို့ လာသည့်တိုင် အလင်းနှစ်ပေါင်း ၆၄၀ အကွာဝေးကို ဖြတ်သန်းလာနေစဉ် လမ်းခုလတ်မှာပင် လေထဲမှာ လွင့်စင်လာတဲ့ မီးတောက်တစ်ခုလို မကြာခင်မှာ ချုပ်ငြိမ်းသွားရမည်သာ ဧကန် ဖြစ်ပေသည်။
တကယ်တော့ ဒါတွေဟာ မာယာပြက္ခဒိန်၏ အဟောများနှင့် ဆက်နွယ်နေသော်လည်း လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း၂၀၀၀ ကျော် ၄၀၀၀ ဆီက Mayan Civilization မာယာ ယဉ်ကျေးမှုဆီက ပညာရှင်တွေသော်မှ အလင်းနှစ် ၆၄၀ အဝေးဆီက ကြယ်တစ်စင်းရဲ့ ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုမှ အပိုင်းအစတစ်ခုက ကမ္ဘာမြေဆီသို့ နေ့ချင်းညချင်း ရောက်လို့ နေတစ်စင်း ပေါ်ထွန်း လာမည်လို့ မဟောခဲ့ပေ။ Mayan Calendar ကတော့ နေစကြာင်္ဝဋ္ဌာ၏ Time Line များကို တွက်ချက်ထားတာမျိုး ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂ မှာ ကျွန်ုပ်တို့ နေ၏ သက်တမ်း ကာလ ကုန်ဆုံးသွားပြီမို့ ကမ္ဘာပျက်လိမ့်မည်လို့သာ တွက်ချက်ထားတာမျိုးပင် ဖြစ်သည်။
သို့သော် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၄၀၀၀) လေးထောင်လောက်ဆီက ယဉ်ကျေးမှုနှင့် စာပေ-ကိန်းဂဏန်း များက မျက်မှောက် ခေတ်နှင့် ဘယ်လိုမှ တစ်သားတည်း မကျနိုင်သလို ဘာသာပြန် အယူအဆများ ကွဲလွဲမှုများက ဧကန် ရှိနေရမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ပ်တို့ မြန်မာပြည်၌ပင် ပုဂံခေတ် လောက်ဆီက စာပေကိန်းဂဏန်းများက မျက်မှောက်ခေတ်နှင့် များစွာ ကွဲလွဲနေတာကို မြင်တွေ့ နိုင်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ မာယာပြက္ခဒိန် ဟောကိန်းများကိုလည်း သိပ္ပံပညာရှင်အချို့က အဘယ်မျှပင် ထောက်ခံလို့ နေပါစေ အတည်ယူ၍မရပေ။ အဓိကတော့ လူသတ္တ၀ါအပေါင်းတို့သည် အတိတ်ဘ၀မှ ကံကုသိုလ်ပါရမီ အဟုန် အကြောင်းတရားတို့၏ သားကောင်များသာ ဖြစ်နေကြတာမို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကို ပေးထားသော အကြောင်းတရားတို့က မတူညီနိုင်တာမို့ တကမ္ဘာလုံး တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်းနဲ့ ချုပ်ငြိမ်းသွားစရာ အကြောင်း မရှိနိုင်ပေ။ နောက်အဓိကအချက်မှာ ဘုရားသာသနာ မကုန်သရွေ့ တည်နေသ၍လည်း ဤကမ္ဘာကြီးက မပျက်နိုင်ပေ။
ထို့ကြောင့် မာယာပြက္ခဒိန်၏ အဟောပင်ဖြစ်စေ၊ သိပ္ပံပညာရှင်တို့၏ တွက်ကိန်းပင် ဖြစ်နေပါစေ ၂၀၁၂ မှာ ကမ္ဘာ မပျက်နိုင်သလို Betelgeuse ကြယ်ကြီးလည်း မပေါက်ကွဲနိုင်၊ နေနှစ်စင်းပေါ်ထွန်းလာစရာ အကြောင်းလည်း လုံးဝရှိနိုင်ပေ။ သို့ဖြစ်၍ ယနေ့ 2011-2012 တွင် အလင်းနှစ်ပေါင်း ၆၄၀ ကျော်ဆီက Betelgeuse ကြယ်ကြီး ပေါက်ကွဲပြီး ၄င်း၏ အပိုင်းအစတစ်ခုက 2012 ခုမှာပဲ ကျွန်ပ်တို့ ကမ္ဘာအနီးမှာ နေ၀န်းတစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ထွန်းလာမည် ဆိုတာကို သိပ္ပံပညာရှင်က ပြောခြင်းလော ? သို့မဟုတ် သိပ်ချာတဲ့ သိပ်ချာပညာရှင်တွေက ပြောလိုက်သော အာကာသသိပ္ပံ ကောလဟာလပင်လော ?
မှတ်ချက်။ ။ 2011- 2013 အတွင်း Solar Cycle 24 အ၀င်နှင့် Sidereal System နိယာနစနစ်၏ အာယန အံသာ (ဒီဂရီ ) များကလည်း 24 ဒီဂရီ မြင့်တက် လာနေခြင်းကြောင့် နက္ခတ်ဗေဒသိပ္ပံ အလိုအရတော့ ကမ္ဘာပေါ်တွင် သဘာဝ ဘေးရန်များနှင့် ရာသီဥတုဖေါက်ပြန်မှုတွေကတော့ တမူထူးခြား ရှိလာနေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ရေကြီးခြင်း-မိုးသီးထန်လို့ ရက်ဆက် ရွာသွန်းခြင်း၊ မြေငလျင်-မီးတောင် ပေါက်ကွဲခြင်း၊ နှင်းမုန်တိုင်း-သဲမုန်တိုင်း ကျခြင်း-လေဖိအားများ ရုတ်တရက် ကျဆင်း လာကာ လေမုန်တိုင်း၊ လေဆင် နှာမောင်း တိုက်ခတ်ခြင်း၊ ဒီရေ အတက်ကြမ်းလာရခြင်းမျိုးများကတော့ သမိုင်းဝင် ရှိလာ နိုင်ပါသည်။ ကမ္ဘာကြီးနှင့် သဘာဝဘေးရန် ဆိုတာကည်း လင်နှင့်မယား လျှာနှင့်သွားဆိုသလို အမြဲ ဒွန်တွဲနေ တတ်တာမို့ နိုင်ငံတိုင်းက မိမိနိုင်ငံရှိ မိုးလေ၀သ၊ ဇလဗေဒဌာနကြီးများ၏ သတင်းများကို လေးလေး စားစား ဂရုတစိုက် နားထောင် သင့်သလို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုများကို အချိန်မှီ ပြုလုပ်ထားသင့် ပေသည်။
နောင်ဆိုလျှင် လူသားတို့၏ Housing System နဲ့ Design များကိုပါ ပြင်ရမှာ ဖြစ်ပြီး အထပ်အမြင့်များ မဆောက်လုပ်ဘဲ ရေကြီးမှု နှင့်ငလျင်ဒါဏ်ကို ခံနိုင်သော မြေပြန့် နှစ်ထပ်အိမ်ယာ စီမံကိန်းများ အပြင် မြစ်ပင်လယ်နှင့် နီးသော အိမ်တိုင်း၌ ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးများ၏ System အတိုင်း Life Jacket သက်ကယ် အင်္ကျီများ လူတိုင်းစေ့ပေးထားခြင်း၊ ရပ်ကွက်တိုင်း၌ Life Boat သက်ကယ်လှေများနှင့် Life Buoy သက်ကယ်ဘောများ ထားပေးခြင်း စသည့် စနစ်များကို နောင်လာနောင်သား တို့အတွက် ယခုကတည်းက နိုင်ငံတိုင်းက စီမံကိန်းတစ်ခု System-တစ်ခုအနေနဲ့ ပုံစံချပေးထားသင့်ပေသည်၊ သို့မှသာ လက်ရှိ အာယန 24 မှ 27 ဒီဂရီ အတွင်း နောင်ဖြစ်လာမည့် သဘာဝဘေးဒဏ်မှ လူသားများ အသက်ဘေးမှ အများဆုံး လွတ်နိုင်ပေသည်။ အသက်ကို ဥာဏ်စောင့် ဆိုသော ခေတ်တစ်ခုဆီကို ရောက်လာလိမ့်မည် ဟုလည်း ဆိုနိုင်ပေသည်။
( အာယနအံသာ 27 ဓီဂရီသို့ နီးလေလေ ကမ္ဘာမြေသို့ သဘာဝ ဘေးရန်များလာရလေ၊ ရာသီဥတု ဖေါက်ပြန်လေ ဖြစ်မည်။ )
စာဖတ် ပရိတ်သတ်တိုင်း အသိအလင်း ဗဟုသုတ တိုးပွားနိုင်ကြပါစေ၊
January 30, 2011@ 2:25 PM -CA
CFOB supports the NLD’s position on economic sanctions on Burma
Canadian Friends of Burma – Ottawa, February 8, 2011
The National League for Democracy (NLD), led by the Burmese democracy leader Aung San Suu Kyi, issuedastatement today reviewing the economic sanctions on Burma. The statement outlinesarationale for maintaining the sanctions and notes that “the hardships of the vast majority of the people of Burma are not related to sanctions, but to misguided government policies.”
The NLD statement calls for those countries imposing economic sanctions, including Canada, to maintain sanctions untilaset of benchmarks, including the release of more than 2,000 political prisoners, are met.
The statement was released in the midst of media speculation on the lifting of sanctions – speculation which the NLD notes “…seem to have been motivated by political considerations.” They went on to note that “Criticism of sanctions, particularly economic sanctions, sometimes serve to divert attention from the main problems plaguing the country.”
The Canadian Friends of Burma (CFOB) supports the NLD’s position and its assessment that the mismanagement and misappropriation of the country’s budget and resources by the military regime isafundamental problem in Burma. CFOB agrees that “Targeted sanctions serve asawarning that acts, contrary to basic norms of justice and human rights, cannot be committed with impunity, even by authoritarian governments”
The NLD ends their statement expressing an interest in further, well-informed discussion. CFOB also supports NLD’s call “for discussions with the United States, the European Union, Canada and Australia withaview to reaching agreement on when, how and under what circumstances sanctions might be modified in the interests of democracy, human rights andahealthy economic environment.”
Therefore, CFOB calls upon the Government of Canada to maintain economic sanctions until Canada’s concerns on human rights situations are addressed and significant political progress is made in Burma. Canada should also take an active role in policy-consultation and coordination with like-minded countries for any reviewing process.
Full policy statement of the National League for Democracy (NLD) can be read at the following link
စစ်မှုမထမ်းမနေရအမိန့်နှင့် တတိုင်းတပြည်လုံးအတွက်အန္တရာယ် ( ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် )
by San Maung on Tuesday, February 8, 2011 at 7:19pm
ကနေ့န.အ.ဖ ဟာ...၂၀၀၈ နာဂစ်အခြေခံဥပဒေနဲ့ ..ကလိန်ကကျစ် အရှက်တရား အလွန်ကင်းမဲ့စွာ..အလွန်အရုပ်ဆိုးလှတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအတုအလိမ်ကိုကျင်းပပေးခဲ့ပြိး..တဖက်သတ် အနိင်ယူထားယုံတောင် အားမရသေးဘဲ...နာဂစ်အခြေခံဥပဒေမှာ အတိအလင်းဆိုထားပြိးသား...ဥပဒေကို ပေါ်ပေါက်လာမဲ့ လွှတ်တော်က အတည်ြ့ပုပြိးရင် အဲဒီဥပဒေဟာ အတည်ဖြစ်စေရမယ်ဆိုထားပါတယ် ။
အခု သန်းရွှေ ဟာ မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးကို..( -ီး ) ထင်တယ် လုပ်ပြလိုက်တာပါဘဲ ။ လွှတ်တော်ခေါ်ဖို့ရက်ပိုင်းလောက်သာလိုတော့တဲ့အချိန်လေးမှာ..သူစိတ်ကြိုက်ဆွဲထားတဲ့ ဥပဒေကို ( ကိုယ်မွေးထားတဲ့ ဥပဒေ ) ကို ပြန်ပြိး မုဒိမ်းကျင့်ပြလိုက်တာပါဘဲ ။ မွေးလု ဆဲဆဲ မိခင်ဝမ်းဗိုက်ထဲက ( ကိုယ့်ရင်သွေး စစ်စစ် ) ခလေး ကို မုဒိမ်း ကျင့်လိုက်တာနဲ့ဘဲ နိုင်းယှဉ်ရပါတော့မယ် ။ ရိုင်းတယ်လို့ ပြောလဲ ပြောကြပါ ။ သူဟာ ကနာမငြိမ်( desperate ) ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ကို လှစ်ဟပြလိုက်တာလဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဥပဒေကိုနားမလည်တာကိုလဲပြလိုက်တာပါဘဲ ။ ဥပဒေကို..မလေးစားရင်တောင် ဥပဒေကို နားလည်သူဆိုရင်..ဒီလောက်အထိ လုပ်ဝံ့ မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
ဥပဒေကို နဲနဲလေးမှ အလေးမထားသူ သန်းရွှေ ပါးစပ်က စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစိ နိုင်ငံတော် ဆိုတာ ယုံကြသူတွေ...စဉ်းစားသာကြည့်ကြတော့ ။သူဟာ ကျနော်တို့ ..၁၉၈၈ တုံးကတော်လှန်ဖြုတ်ချခဲ့တဲ့ ( ဥိး )နေ၀င်း ထက် အလွန်နိမ့်ကျသူ..အောက်တန်းကျသူတဥိးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြလိုက်တာပါဘဲ ။ ဥိးနေ၀င်းဟာ ဥပဒေကို မလွန်ဆန်မိအောင် အမြဲဆင်ခြင်ပါတယ် ။ သူဟာ နိုင်ငံတကာတွေကို နစ်စဉ်..လူကြိးလူကောင်းံပုံ့စံနဲ့ သွားလည်နေသူဆိုတော့...လူပြောမခံရအောင် ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် ပြုမူပါတယ် ။ လူလည်ဆိုတော့..ဥပဒေကို မချိုးဖေါက်မိအောင် သတိထားတယ် ။ လည်လွန်းတော့..ဥပဒေကို သူလိုသလို ဆွဲ ကစားပါတယ် ။ ဥပဒေကို လက်တလုံးခြားလှဲ့ ကစားပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ..ဥပဒေမဲ့ မလုပ်ဘူး ။
ဒေါက်တာမောင်မောင် ကို အမြဲတိုင်ပင်တတ်ပါတယ် ။ သူလုပ်ချင်တာကို...ဒီယုံဖမ်းဖို့ဒီခြုံ ပြင်လုပ်ပါတယ် ။
အခုဆောင်းပါးမှာ ကျနော် စာဖတ်သူများကို ရှင်းပြဖို့ လိုတာလေး ရှင်းပြပါရစေခင်ဗျာ ။
ပထမ တချက်က ...အာဏာရှင် ချင်းအတူတူ ဥိးနေ၀င်းကျတော့ ဥိးနေ၀င်းလို့ သုံးနုံးပြီ...သန်းရွှေကျတော့ ( သန်းရွှေ ) လို့ သုံးတာ..ဘက်လိုက်ရာ..ကိုယ်ထက်အသက်ကြိးသူကို ရိုင်းဆိုင်းရာရောက်နေတာလေး ပထမ ရှင်းလင်းပါရစေခင်ဗျာ ။ ဥိးနေ၀င်းဟာ...အသက်ခြောက်ပြည့်တာနဲ့ ..( တဖက်လှဲံ့ ) စစ်တပ်ကထွက်ပြိး..ဥိးနေ၀င်းလို့ တရားဝင်ပြောင်းခဲ့ပါတယ် ။ မကောင်းလဲ ဥိးနေ၀င်းဘဲပေါ့ ။ မြန်မာ့ ထုံးတမ်းအရ.ဥိးတပ်ခေါ်ရမှာပါဘဲ ။ အဲဒီလိုမခေါ်ရင် ကျနော်ဟာ..ထောင်ဝန်ထမ်းတွေလိုဘဲ...ဖြစ်နေပါမယ် ။ ဥိးနေ၀င်းဟာ..အဲဒီမှာကို ဥပဒေကို ဘယ်လောက်အလေးထားတယ်ဆိုတာ ပြလိုက်တာပါဘဲ ။
သန်းရွှေဟာ...အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ ဒု-ဥိးစိးချုပ်ဖြစ်လာရတာဟာ....ဥိးနေ၀င်းရဲ့ ဥပဒေအပေါ်အလေးထားမှု ကြောင့်ရလာတာပါ ။ ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ထင်..အသက်ခြောက်ပြည့်လို့ ..ယူနီဖေါင်းချွှတ်ရတော့ သူ့ နောက် ဥိးစိးချုပ်လုပ်ရသူ နစ်ဥိးဟာ..( ၂..၃.) နစ်အကြာမှာ ထပ် အသက်ခြောက်ဆယ်ပြည့်လို့ဥိးစိးချုပ် ခဏခဏ ပြောင်းရတာ..နိင်ငံတော်လုံခြုံရေးအတွက် မကောင်းလို့ ..ဥိးစိးချုပ်စောမောင် အနားယူရင်..အချိန်ကြာကြာ ဥိးစိးချုပ်ခန့် နိုင်ဖို့ ...အသက်ငယ်ရွယ်သူကို အရှာခိုင်းတော့...လူက ရိုးရိုးအအ ဟန်ဆောင်ကအကောင်း....တိုင်းမှုး ဘ၀မှာကို..အိမ်မှာ တကယ်ကြက်မွှေးမြူရေးလုပ်တဲ့သူဆိုတော့...လူရိုးဘဲ ထင်ပြိး သူ့ ကိုရွေးလိုက်တာပါ ။
“တိုင်းပြည် အင်အားရှိဖို့ အရေးကြီးတယ်” (ကာတွန်း ဘီရုမာ)
သူကလဲ လူလယ်လေ ။ တပ်မှုးကြိးများညစာစားပွဲမှာဆိုရင်..ဘီယာကို မသောက်တတ်လေယောင်ဆောင်ပြိး...ဘီယာကိုဆော်ဒါရောသောက်ပြိး မှုးပြတယ်လေ ။ အဲဒီလို လူလယ် ( လူလိမ် ) မသောက်တတ်တာမဟုတ်...မသောက်တတ်ချင်ယောင်ဆောင်ပြတာ ..အယောင်တောင်တာဟာ ( လိမ်တာ ) ဘဲလေ ။ ဥိးနေ၀င်း ဥပဒေကို လေးစား လို့ သူ ဥိးစိးချုပ်ဖြစ်လာတာကိုတောင် မထောက်ထားဘဲ....သူ့ အလှဲ့ ကျတော့..ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြိး ဆက်လုပ်နေတာဟာ....သူကိုယ်တိုင်..မြန်မာ့ဥပဒေ..တပ်မတော်ဥပဒေကို ..ထင်သလို ချိုးဖေါက်နေတာဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီနေရာမှာ...( ကျနော်ထောင်ထဲမှာဘဲ ..ရှိသေးတယ် ) ..ဥိးနေ၀င်းက...တကြိမ်မက..တ.စ.ည သူ့ တပည့်ဟောင်းတွေနဲ့ ဆုံတိုင်း..သန်းရွှေအကြောင်းပြောမိရာမှာ...ဟာဒီလူက..အာဏာက ဆင်းပေးတော့မှာမဟုတ်ဘူး...တို့ ..သန်းရွှေက အာဏာမက်နေတာမဟုတ်ဘူး ကြိုင်ကြိုင်က မက်နေတာ....ဖြုတ်ချမှ ရတော့မယ်..ဆိုတာမျိုးပြောမိ..ပြောတတ်ပါတယ် ။ အဲဒါကို ကြိုင်ကြိုင်က အခဲမကျေတော့...လံကျုတ်ဇတ်လမ်းလုပ်ပြိးဖမ်းတာပါ ။
နောက်တခုက..တ.စ.ည တပ်မှုးဟောင်းကြိးတွေ ကတော်စောင်းကြိးတွေက ဥိးနေ၀င်းအာဏာမဂှိတော့ပေမဲ့ ..အဖေလို ကိုးကွယ်နေတာကို မနာလိုရှုစိမ့်တာလဲပါ..ပါတယ် ။ ပိုဆိုးတာက...သူတို့ တွေက..စန္ဒာဝင်းကို..လေးစားကြတာကို မခံချင်အဆုံး ပါဘဲ ။ ..၁၉၉၆ ခုနစ်..ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ထင်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်စန်းယု..အာသုဘ နစ်ခု..နစ်ရက်ဘခြားပြိး..တော်လှန်ရေးနေ့ ဝန်ကျင်မှာ ဖြစ်လိုက်တော့...မကြိုင်သွားးတာ...အများက သူ့ ကိုအလေးသိပ်မထား...မစန္ဒာ..မစန္ဒာ လုပ်နေတာ သိပြိး ဆက်မသွားတော့ဘူး ။ လှည့်ပြန်သွားပါတယ် ။ ဒီလောက်ဆို..အမြင်ကျယ်သူတွေ သဘောပေါက်ပါပြီ ။
မ၀ယ်မနေရ၊ မလာမနေရ၊ မလုပ်မနေရ၊ မရေးမနေရ .... စစ်မှု မထမ်း မနေရ .....
“စစ်မှု မထမ်းမနေရ” (ကာတွန်း ဘီရုမာ - ဧရာဝတီဝက်ဘ်ဆိုက်)
ဒါပေမဲ့လမ်းမကြိးတွေမှာထောင်ထားတဲ့ ..ဆောင်ပုဒ်ကြိးတွေမှာ..( ဥပဒေကိုလေးစားပါ..လိုက်နာပါ ) ရေးထားတဲ့ ..ဆိုစကားတွေကိုလေးစားတာကြောင့်ကော..ကျနော်ဟာ ဥပဒေကိုမချိုးဖေါက်ချင်လို့ ..ဥပဒေဘောင်လွန်ပြိး...ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်နေသူ ဘယ်သူကိုမဆို..ခင်ဗျားတို့ က ကြောက်လို့ ဘဲခေါ်ခေါ် ( ဘာအကြောင်းပြချက် ) နဲ့ဘဲခေါ်ခေါ် ..အဲဒီလိုခေါ်နေတာဟာ...ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်တိုင် ဥပဒေကိုချိုးဖေါက်ရာရောက်နေပါပြီ ။
ဥပမာဗျာ...ဆရာဝန်အတုတယောက်ကို..ခင်ဗျားတို့ က အတုမှန်းလဲသိတယ်..ထားပါတော့ ဆရာ ဆရာနဲ့ ခေါ်ကြရင်..သူ့ အကြောင်းမှန်ကိုမသိသူတွေက..ဆရာဝန်အစစ်ထင်ပြိးအားကိုးတကြိး ကုမယ်..ဒုက္ခရောက်ရင် ချင်ဗျားတို့ပယောဂ မကင်းသလိုပေါ့ ။ မစစ်မှန်သူကို မခေါ်သင့်တာကို..မခေါ်ဆိုဖို့ ..ဘုရားဟောတွေထဲမှာကော...လက်ရှိဥပဒေထဲမှာလဲ ပြဒါန်းထားပြိးဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီတော့ ကျနော်က ဥပဒေကို မချိုးဖေါက်နိုင်တော့...ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြိး လို့ မပြောနဲ့အု့း..ဗိုလ်ချုပ်လို့ တောင် မခေါ်နိုင်ဘူး ။ တခါ ဥိးသန်းရွှေခေါ်ရအောင် သူကိုတိုင်က..သူ့ ကိုယ်သူ ဥိးသန်းရွှေ လို့ မှ အသိအမှတ်မပြုသေးတော့..ခေါ်စရာ..တခုဘဲရှိတော့တယ်လေ ။ သူတို့ တပ်ထဲကလူတွေ ၀န်ကြိးတွေ ..သူ့ ကို ဥိးသန်းရွှေလို့ ခေါ်ဝံ့သူ ရှိရဲ့ လား ။ မျိုးပါကန်းသွားနိုင်တယ် ။ ..ဒီတော့..သန်းရွှေ ဘဲပေါ့။
ဘွဲ့ ထူး ဂုဏ်ထူးတပ်ခေါ်ကျကြေးဆိုရင်...ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြိးရာထူးကို ခိုးယူထားလေသူဆိုတော့...သူခိုးဗိုလ်ချုပ်မှုးကြိး လို့ ခေါ်ရမလား..ဗိုလ်ချုပ်မှုးသူခိုးကြိးလို့ ခေါ်ရမလား..အကြံသာပေးကြပါ ။
နောက် ဒုတိယ တခုရှင်းဖို့ လိုတာက..သူဟာ ဥပဒေကို ဘယ်လောက် (ေ-သာက် ) ရေးမလုပ်သလဲဆိုတာပါ ။ ၁၉၈၉ နစ်..မေလ..ဖွန်လလောက်မှာ..NLD လူငယ်တာဝန်ခံ..စိုးသိမ်း နဲ့ မသီတာ..တို့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီနေရာမှာ..အဖွဲ့ ချုပ်ဘက်က အားနည်းတာလေးပါထောက်ပြလိုပါတယ် ။ အဖွဲ ချုပ်ဖွဲ့ ခါစ ကာလ မှာ...အဖွဲ့ ချုပ်ဟာ..န.အ.ဖ ကို ဟန်နဲ့ တော်လှန်ပြရဲသူကိုမှ ( ဆင်ဖမ်းမယ်...ကျားဖမ်းမယ်..မြွှေပွှေး ကစ်ဆင်ရိုက်မယ် ) ဆိုသူတွေကို..နိုင်ငံရေးသမားကောင်း..ခံယူချက်ပြည့်သူ ထင်ကြပုံရှိပါတယ် ။ အဲဒီလိုလူတွေကို နေရာပေးထားပါတယ် ။ ကျနော်က သူ့ ပုံတွေ စာမျက်နာပေါ်ပါလာတော့..( ဟာ..ဒီလိုဥပဓိ ရုပ်က သစ္စာရှိသူမဟုတ်ဆိုတာ တန်း ပြောနေမိပါတယ် ) မကြာပါဘူး..ကိုယ်ချစ်သူနဲ့ ရတဲ့ ကိုယ့်သားသမိးအရင်းကို ပြန်သတ်တဲ့ ( ဘီလူးထက်ဆိုးတဲ့လူစား ) လူယုတ်မာဆိုတာ သက်သေပြလိုက်ပါတယ် ။
အဲဒီမှာ ခင်ညွန့် တို့ က ခြုံထွင်ပါတော့တယ် ။ စိုးသိမ်းကော..မသီတာကိုကော..ကိုယ်ဖျက်ချပေးသူ..ဒေါက်တာဒေါ်ခင်ခင်( အသက် ရ၀-ခန့်ံ ) ကိုရော..ဒေါက်တာဒေါ်ခင်ခင်ဆီသွားလို့ ..နံမည်လေးညွှန်းမိသူ..ဒေါက်တာ ဥိးဌေးကြွယ် ( မြောက်ဥက္ကလာ ) အပြင်..ကားနဲ့ပို့ သူအပါအ၀င်..နေမကောင်းလို့ ဆေးကုပေးသူ..( ရိုးရိုးအဖျားကျဆေးကုပေးမိသူတွေကိုပါ ) အကုန်ဆွဲ ဖမ်းပါတော့တယ် ။ ပြိးမသီတာကို..ဗဟိုအမျိုးသမိးဆေးရုံကြိးမှာ...သားအိမ်အတွင်းအပြင်..ဆေးစစ်ပါတယ် ။ သားအိမ်ကို ဆေးစစ်ပါတယ် ။ ဗဟိုအမျိုးသားဓါတ်ခွဲခန်းမှာကော...( C.I.D မှုခင်းဌာန ) ဓါတ်ခွဲခန်းမှာပါစစ်ပါတယ် ။ နစ်ဌာနစလုံးမှာ..ဖျက်ချထားတဲ့ လက္ခဏာ..ဆေးဝါး..ဘာမှမတွေ့ ပါဘူး ။
ဒီတော့ ပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့..တဖက်လှဲ့ နဲ့ စိုးသိမ်း နဲ့ မသီတာကို ပြန်ဖမ်းမယ်..လို့ ညာသံပေးလိုက်ပါတယ် ။ တောခြောက်တယ်ပေါ့ ။ ဒီတော့ ကိုယ်တော်ချောက ပုန်းနေပါလေရော ။ အဲဒီမှာ စိုးသိမ်းအဖေပါဆိုပြိး..အဖွဲ့ ချုပ်ရုံးကို ဖုံးဆက်လာပြီး...စိုးသိမ်းအတွက်ပူပင်လို့ ဘာညာပေါ့ ။ ပြိးဥိးဝင်းတင်ကို တွေ့ ချင်တယ်ပေါ့ ။ ဥိးဝင်းတင်က အစည်းအဝေးထဲမှာမို့ ..ဘာမှမပူပါနဲ့စိတ်ချရတဲ့နေရာမှာ..စီစဉ်ထားပေးပါတယ်ပေါ့..( တဆင့် ) ပြန်ဖြေလိုက်တယ် ။
နောက် နစ်ရက်နေတော့...နံနက်စောစောစိးစိး ( ၄.၀၀ နာရိလောက် ) မှာ...ဒေါ်ခင်ခင်..ဥိးဌေးကြွယ်..အပါအ၀င် တပြုံကြိးကိုလာဖမ်းပြိး...မနက် ၈.၀၀ နာရိမှာ..တရားရုံးကို စောဖွင့်ပြိး..တထိုင်ထဲ အမိန့် ချမှတ်လိုက်ပါတယ် ။ တခါချမှတ်လိုက်တဲ့အမိန့် ကလဲ...သူတို့ ကိုးကားတဲ့ ..ပုဒ်မ က..၃၇ ( ? ) ရာဇသတ်ကြိးပုဒ်မတွေ နဲ့ အကိုးအကားပါ ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ ကိုးကားတဲ့ ပုဒ်မက..ကိုယ်ဝန် ( ငါးလ အောက် ကိုယ်ဝန် ) ကို အများဆုံး..ထောင်ဒါဏ် ( ခြောက်လ ) ထက်မပိုစေရ ဆိုထားပါတယ် ။
သူတို့ ချလိုက်တာက..( ၁၀ ) နစ်ပါ ။ ဒီတော့ ကျနော်နဲ့ ..ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်ခင်ရဲ့ သား..ဒေါက်တာခင်မောင်လွင် တို့အမိန့် ချမှတ်တဲ့ တရားသူကို သွားတွေ့ ပါတယ် ။ ဥပဒေစာအုပ်ကြိးနဲ့ ကိုင်ပြောတော့တာပေါ့ ။ အဲဒီမှာ တရားသူကြိး ( နံမည်တော့မေ့သွားပြီ ) က..မျက်စေ့မျက်နာပျက်ပျက်နဲ့.( .ကျနော်ဘာမှ မသိရပါဘူး..အမှုက ဘာဆိုတာတောင် မသိရပါဘူး...မနက် ၆.၀၀ နာရီ အိမ်လာနိုးပြိး..အရေးကြိးအမှု တခုစစ်ရန်ဆိုပြိး စစ်ကားနဲ့ လာခေါ်တယ် ။ ထိုင်ခိုင်းတယ်...ပြိး ..စာအိပ်တခုပေးပြိး..ဖတ်ခိုင်းတာပါဘဲ )လို့ ဝန်ခံပါတော့တယ် ။ ( တရားသူကြိးက ပြောလိုက်ပါသေးတယ်.ကျနော်တောင် ဘာမှန်းမသိဘဲ ဖတ်နေတာမှာ..အများဆုံး ခြောက်လသာ ချနိုင်တာကို..( ဆယ်နစ် ) လို့ ဖတ်မိပြိး..တန့် သွားမိတာ ခင်ဗျားတို့ အားလုံး သတိထားမိလိုက်ကြပါတယ် ) ဆိုလာပါတယ် ။ ဟုတ်ပါတယ် ။ ဖတ်ရင်း တရားသူကြိး တန့် ကနဲ့ဖြစ်..ဟိုကြည့်..ဒီကြည့်ဖြစ်သွားပါတယ် ။
ဟုတ်ပါတယ် ။ မွေးခါနိးနိးကယ်ဝန်ကို ဖျက်ချရင်တောင်..အများဆုံးထောင်ဒါဏ်ကမှ...( ၃ ) နစ်ပါ ။ မသီတာကိုယ်ဝန်က..တလခွဲ ဘဲရှိသေးတော့..ထိုးဆေးထိုးပေးတာနဲ့တင် ပျက်ကျတဲ့ ကိုယ်ဝန်ပါ ။
အဲဒိတော့ တရားသူကြိးက...ဒါဟာ ဥပဒေ ဘောင်ကျော်တဲ့ဟာကို နိုင်ငံတော်အကြိးအကဲဆီစာတင်ပါဘဲ ညွှန်းလိုက်ပါတယ် ။ ဒီတော့ စောမောင်ဆိကော..သန်းရွှေ..ခင်ညွှန့် အကုန်တင်တာပေါ့ ။ ဘာမှ အကြောင်းပြန်မလာတော့..အမျိုးတော်..( အဲဒီတုံးက ဗိုလ်မှုး ) ကိုကျော်သိန်း(ထောက်လှမ်း ) ဆီကိုသွားတွေ့ ပြိး..ခင်ဗျားတို့ .ကိုးကားထားတဲ့ ..ရာဇသတ်ပုဒ်မ အရဆိုရင်..ခြောက်လ ထက်ပိုချ လို့ မရဘူး...ပြန်စဉ်းစားပေးပါတောင်းဆို ပါတယ် ။ ကိုယ်တော်...ဘာပြန်ပြောသလဲဆိုတော့...ဥပဒေစာအုပ်နဲ့လာကိုးကားတာမလုပ်နဲ့ .. ။ ပိုနာသွားမယ် ။ ကျုပ်တို့ က စစ်တပ် ဘယ်ဥပဒေမှ အရေးမလုပ်ဘူး ။ ကျနော်ကလဲ ဘယ်ရမလဲ..ဒါဆို..အမိန့် ထဲမှာထဲ့ရေးလိုက်လေ..ဥပဒေအရ ( ခြောက်ထက်မပိုရဆိုသော်လည်း..) ဆိုတာထဲ့ရေးလိုက်လေ ချဲတာပေါ့ ။ ခင်ဗျား ပြန်ပါ..ကျုပ် သွားစရာရှိတယ်လုပ် အိမ်ပေါ်တက်သွားတော့ပါတယ် ။
အဓိက ကတော့..မင်းတို့ ..ရာဇသတ်ကြိးကို ( -ီး ) ထင်တယ်ပြောလွှတ်သလိုဘဲ ခံစားနေမိတုံးပါဘဲ ။. ရှင်းနေပြိ...ဥပဒေကို (ေ-ာက်ရေးကိုမလုပ်တာနော် ) ။အဲဒီမှာ ရှိသေးတယ် ။ စိုးသိမ်းတို့ ကို ဖမ်းပြိး..တဆက်ထဲ ဥိးဝင်းတင်ကို..တရားခံပြေး ကို ကူညီ ၀ှက်ထားပေမှုနဲ့ ထောင်ဒါဏ် ( အများဆုံး ) ဆိုပြိး ( ၃ ) နစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ် ။ ဥိးဝင်းတင်ကို ဖမ်းချင်လို့ ..ဆင်တဲ့ အမှု ။ မတရား..အထောက်အထားမခိုင်လုံဘဲ အကွက်ဆင်လိုက်တဲ့အမှု ။ူသူတို့ ကို ခြောက်လသာချပြိး..တရားခံ ကို ၀ှက်ပေးသူကို..( ၃ -နစ် ) ချရင်..ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်နေမှာမို့ ..ဥပဒေကိုကျော်လွန်ပြိး..ဆယ်နစ်မောင်းလိုက်တာပါ ။
မပြိးသေးဘူး...၁၉၉၂ ကျတော့...နိုင်ငံတော်လွတ်ငြိမ်းခွင့်ဆိုပြိး...စိုးသိမ်းအပါအ၀င်..အားလုံးကို..နစ်နစ်ကျော်ဖမ်းထားရာကနေ လွှတ်လိုက်ပါတယ် ။ ( ၃ .နစ် ) မောင်းထားသူ ဥိးဝင်းတင်ကို ဆက်ကာဆက်ကာ.အမှုဆင်လိုက်တာ...အနစ်..နစ်ဆယ်လောက် ဖြစ်သွားပါတော့တယ် ။
သန်းရွှေ က အဲဒီလို ဥပဒေကို..အလေးမထားတာ...ရှင်းတယ်နော် ။ တခါ အဖွဲ့ ချုပ်ဘက်က နာတာ...စိုးသိမ်း.. ( ကလေးဖျက်ချမှု ) ကို..၀င်မကူသင့်ပါဘူး ။ ကူတာ သူတို့ အမှား ။ ကူလို့ ဥိးဝင်းတင် ထောင်ချောက်မိသွားတယ် ။ စိုးသိမ်းက ထောင်က လွှတ်ပြိးတော့...နောက်ဆုံး..မန္တလေး..သပိတ်ကျင်းဘက်မှာ...ထွန်းကြည်အမျိုးတွေနဲ့ပေါင်း..ရွှေတွင်းလုပ် ချမ်းသာနေပါတော့တယ် ။ ကိုယ်ကြိုးကိုဥိးစားပေးတဲ့လူစားကို ကူမိလျှက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နစ်နာမှုတွေပါ ။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာ..ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချလို့ ဖမ်းတယ်ဆိုတာ...မရှိသလောက်အမှုကိစ္စပါ ။ မလွှဲသာ..လူသေတာဖြစ်ပြိး..မဖုံးနိုင်မဖိနိုင်ဖြစ်ကာမှ အမှုဖြစ်ကြတာပါ ။ အဲဒီလိုဖမ်းမယ်ဆို၇င်..ရန်ကုန်မြို့ လယ်ခေါင်က နံမည်ကြိးသားဖွားခန်းကြိးတခုမှာဆို..နေ့ စဉ် ဖျက်ချနေတာ...ဆယ်ယောက်မကဘူး ။ တောင်ဥက္ကာလာ..အားကစားကွင်းဘေး.( စစ်တပ်စွဲထားတယ်နော် ) ..တနေ့ တနေ့အများကြိးဖျက်ချနေတာ. သတိပေးတာတောင် မလုပ်ပါဘူး ။
အခု စစ်မှုမထမ်းမနေရလုပ်လာပါတယ် ။ အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ...သူ့ ပါးစပ်ကဘဲ..ဘယ်ခေတ်ဘယ်အခါကမှ မရဘူးတဲ့ တိုင်းရင်သား..ဘယ်နစ်ဖွဲ့ နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရထားတယ်ပြောတာလဲ..ဒီပါးစပ်...အခု စစ်မှုမထမ်းမနေရကို..လွှတ်တော်က အတည်ပြုအောင်ထိအောင်တောင် မအောင့်နိုင်တာလဲ ဒီပါးပါဘဲ ။ အခုငြိမ်းချမ်းရေးရနေပါတယ်ဆိုပြိး ဘာလို့စစ်မှုမထမ်းမနေရအပြင်..နိုင်ငံတကာမှာ ကျင့်သုံးခြင်းလုံးဝမလုပ်တဲ့ ဥပဒေကို ထုတ်ပြန်လိုက်တာ....စစ်မှုထမ်းပါမယ်လို့ နစ်စဉ်နစ်တိုင်း..စာတင်ရမယ် ။ မတင်ရင် ဖမ်းနိုင်းခွင့်ဆိုတဲ့ ဟာက..( ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့် ) တို့ ပြောပြောနေတဲ့..မတရားတဲ့ဥပဒေဟူသမျှ..တာဝန်အရဖီဆန်ကြ ဆိုထားတာမှာ....ဒီဥပဒေဟာ...မတရားမှုတွေအားလုံးရဲ့ထိပ်ခေါင်ပါဘဲ ။
ကဲ..မတရားတဲ့ဥပဒေဟူသမျှ တာဝန်အရ ဖီဆန်ကြဆိုသူတွေမှာတာဝန် ကျလာပါပြီ ။ ဒီဥပဒေအတည်ပြုလိုက်တာနဲ့ ..အလိုလို..စစ်ကျွှန်ဖြစ်သွားပါပြီ ။ စာမတင်တာနဲ့တင် ဖမ်းခွင့်ရှိသွားပါပြီ ။ စာတင်ပြန်ရင်လဲ..စစ်ထဲဆွဲ သွင်းခွင့်ပေးလိုက်ရပါပြီ ။ ( ရိုင်းရိုင်းပြောရရင်...စိတ်ထင်တိုင်း.( ဖ ) ချပါတော့လို့ ..ကုန်းပေးလိုက်ရတဲ့ဘ၀ ရောက်သွားပါပြီ ။ ရိုင်းတယ်မထင်ကြပါနဲ့ ...တွေးကြည့်ရင် ရင်နာစရာအလွန်ဖြစ်ရလို့ ပါ ။
ပိုဆိုးတာ ပိုလူပါးဝထားတာက...မြန်မာပြည်မှာ အခုထက်ထိ...အမျိုးသမိး လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ မရှိသေးဘဲ..မြေပေါါ်မြေအောက်..သက်ရှိအားလုံး..ကျားမ-မရွေး ငါတို့ ထင်တိုင်း.( မုဒိမ်း ) ကျင့် ခွင့်ပြုရေးလုပ်လိုက်တာပါဘဲ ။
ဒါဘာရည်ရွယ်ချက်လဲ စဉ်းစားမိကြပါသလား ။ သူ့ တာ၈တ် ( TARGET ) က ဘာလဲ ။ ရှင်းပါတယ် ။ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတဲ့ လူငယ်တွေကိုရွေးဆွဲမယ် ။ တပ်ထဲမှာ မတရားတင်းကျပ်မယ် ။ မလိုက်နာနိုင် ရင် ( စစ်ဥပဒေ ) နဲ့ ထောင်ချပြစ်မယ် ။ စစ်ရုံးက ချမှတ်တာကို...လွှတ်တော်က ၀င်စွက်ဖက်ခွင့်မရှိစေရဆိုထားတယ်လေ ။ တချို့ ကိုရှေ့ တန်းပို့ မယ် ။ စစ်ကြောင်းချီတက်ခိုင်းပြိး..ရန်သူအတုနဲ့အပြတ်ရှင်းမယ်လေ ။
စစ်မှုမထမ်းချင်လို့ ပြည်ပထွက်ချင်ဖို့ တောင် မကြာခင် စစ်မှုမထမ်းသေးရင် မထွက်ရနဲ့ ကန့် သတ်လာပါမယ် ။ ထွက်ပြန်ရင်လဲ မတရားအခွန်တောင်းပါတော့မယ် ။ လာမှာပါ မပူနဲ့။ စစ်မှုထမ်းပြိးသူက အခွန်တမျိုး..လုပ်လာပါမယ် ။ ကြံ့ ဖွတ်ထဲဝင်မယ်ဆို၇င်..စစ်မှုထမ်းတာမကျအောင် လုပ်ပေးမယ်တွေ လာပါမယ် ။
ဒီတော့...ဒီမတရားလှတဲ့ ( မတရားတကာတို့ ရဲ့ ထိပ်ခေါင်. ).မတရားလှတဲ့ဥပဒေကြိးကို..ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ဥိးဝင်းတင်တို့ ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ပါမလဲ ။ တတိုင်းတပြည်လုံးထဆူအောင် ဆွှပေးန်ိင်မလား ။
ကျနော်မြင်တာလေး....ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေ နဲ့ အမြင်တူမယ်...လုပ်ပေးလိုက်ရင်...တတိုင်းတပြည်လုံးတင်မက..စစ်တပ်ကြိးတခုလုံးပါ ထဆူလာစေရပါမယ် ။ စစ်သားတွေရဲ့ လစာဟာ..အင်မတန် ( အာရှ မှာကို ) ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်နည်းနေပါတယ် ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်အနေနဲ့ ..စစ်သားတွေရဲ့ လစာကို..( ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ထက်ဝက် ) လောက်ပေးနိုင်မဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ဆွေးနွေးပြိး..မီဒီယာတွေပေါ်တင်ပေးလိုက်ပါ ။ သန်းရွှေ ထွက်ပြေးစေရပါမယ် ။ စစ်သားတွေကို...ရာသက်ပန် ကျွှန်လို မတရားသဖြင့် စာချုပ်နဲ့ ချီနောင်တုတ် ခိုင်း...စစ်မြေပြင်မှာသေတော့...အလောင်းတောခွေးစားတာ ခံရ ။ ကျန်ရစ်သူမိသားစုကတော့..နောက်ဆုံး..သူများမယားငယ် ခံကြရ..အများစုကတော့..ပြည်တန်ဆာဘ၀ ထဲရောက်သွားကြရတာတွေ ကိုစာရင်းကောက် ထုတ်ပြန်ပေးဖို့ လိုပါတယ် ။
၂၀၁၁ က ညစ်ပတ်စွာ ကြိုဆိုပါ၏
ဘီရုမာ Tuesday, 04 January 2011 17:42 ကာတွန်း
အလုပ်သမားတွေအတွက် အနိမ့် ဆုံးလုပ်( နေ့ စား လုပ်ခ ) ကို ဘယ်လောက်သတ်မှတ်သင့်တယ် ကြေငြာလိုက်ပါ ။ အလုပ်သမားထုကြိး ထဆူလာစေရပါမယ် ။ ချကြပါ ပြောစရာမလိုပါဘူး ။ မဆူအောင်သူတို့ လစာတိုးပေးရရင်လဲ..ကိုယ်လုပ်ပေးလို့ ဆိုတာ ပြည်သူတွေက ( အ အ ) တွေမှမတုတ်တာ သိတာပေါ့ ။ ဘယ်သူကြောင့်ငါတို့ အဆင်ပြေလာတယ်ပြောလာကြပါမယ် ။ သိပါတယ် ။
လစာ..နဲ့ လုပ်ခတိုးပေးလိုက်တာနဲ့..န.အ.ဖ ငွေပိုတွေ ဖေါက်ထုတ်ခံလိုက်ရတာပါဘဲ ။ သူတို့ အတွက် ( ဆုတ်လဲဆူး..စားလဲရူး DILEMMA ) ဖြစ်အောင်ကိုင်တတ်ရပါမယ် ။ အခု အဖွဲ့ ချုပ်က စိးပွားရေးပိတ်ဆို့ တာကို...ဆက်လုပ်ဖို့ တောင်းဆိုတာ..ပြည်သူတွေ ကိုမထိခိုက်ဘူးဆိုတာ ကတော့ ..မှားနေပါတယ် ။ န.အ.ဖ တွေကို ထိပါတယ် ။ သူတို့ ကို ထိ သွားလို့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ။ တနစ်ကို..ဒေါ်လာနဲ့..ဆယ်သန်းမမြတ်တာဘဲရှိမယ် ။ ဒေ၀ါလီ ခံစရာအကြောင်းမမြင်ပါဘူး ။ ပြည်သူတွေကို အလုပ်အကိုင် ရှားပါးနေရတဲ့အခါမှာ..ပြည်သူတွေကို မထိခိုက်ပါဘူးဆိုတာဟာ....ကျနော် ပြည်သူတွေထဲ ကျင်လယ်လာခဲ့သူပါ ။ ထထြဲဝင်ဝင် တနေ့ လုပ် တနေ့ စားပြည်သူတွေကို တကယ်ကိုယ်တွေ့ မေးကြည့်ကြပါအု့း ။
အခု..ခေတ်က အမေရိကန်လုပ်ငန်းရှင်တွေက ၀င်လာချင်ရင်..တခြားတနိုင်ငံကနေ ၀င်လာလို့ ရနေတာဘဲ။ အခုမြန်မာ ပစ္စည်းတွေလဲ ကြားခံနိုင်းငံတွေကနေ ထွက်နေတာဘဲ ။ မြန်မာလူထုက လုပ်ရပြိး လုပ်ခ ပိုနာတာဘဲ အဖတ်တင်တာပါ ။ အခု ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း ကို အဖွဲ့ ချုပ်က့ တားလို့ ရနိုင်မလား ။ ဒေါ်လာ..( ဘီလျှံပေါင်း ) ၁၂၀ အထက်ဝင်လာမှာပါ ။
နောက်တခုက တနေ့ တခြားမြန်မာတွေ ပြည်ပ ထွက်လုပ်တာ ပိုပိုများလာတာ..စိးပွားရေး ထိခိုက်တာရဲ့..အခက်အလက်တွေ မဟုတ်ပါဘူး ငြင်းချင်ပါသလား ။
အဖွဲ့ ချုပ်ဟာ..န.အ.ဖ ကို တကယ် က ပူးကပ်ပြိး သတ်ရမှာပါ ။ အလဲမထိုးနိုင်ရင် ပူးသတ်ရပါမယ် ။ န.အ.ဖ ဟာ အဖွဲ့ ချုပ်ကို ငဖယ်တေ တေလာခဲ့တာ အကြိမ်းပေါင်း များစွာ ။ အဖွဲ့ ချုပ်က န.အ.ဖ ကို ထိုးနက်နိုင်ခဲ့တာ မရှိသလောက်ပါ ။ တကယ်တော့ ..န.အ.ဖ ဟာ ဖန်( မှန် ) အိမ်ဆောက်ထားသူ နဲ့တူနေပါတယ် ။ အဖွဲ့ ချုပ်က..တဲအိမ်နဲ့တူနေပါတယ် ။ မှန်အိမ်ထဲက လူက တဲအိမ်ကို ခဲ နဲ့ အကြိမ်ကြိမ် ထုနေတာကို..တဲအိမ်ကလူက ပြန်မထုရဲ တာပါ ။ အင်္ဂလိပ်အဆိုလေးရှိတယ် ။ မှတ်မိသလောက်လေး ရေးရရင် ( DO NOT THROW STONES TO OTHERS , IF YOU LIVES IN A GLASS HOUSE ) ကိုယ်က မှန်အိမ်မှာနေရင် သူတပါးကို..ခဲနဲ့ မထုပါနဲ့ တဲ့ ။
န.အ.ဖ ဟာ.မှန်ပါးပါးလေးနဲ့ ဆောက်ထားသလိုပါဘဲ ။ မူဝါဒ ကမရှိ ။ အလိမ်တွေ အင်တွေ အညာတွေ ။ ဟိုနိုင်ကို တမျိုးပြော..ဒီနိုင်ငံကို တမျိုးညာ..နဲ့ လိမ်ညာဖါထေးနေရတဲ့ အခြေအနေပါ ။ တကယ် နိုင်ငံရေး အမြင် ကျယ်ကျယ် နဲ့ သု့းသပ်ပြိး ကိုင်တတ်ရင်...ကော့နေအောင်..အရှိုက်ကို ထိုးချလို့ ရပါတယ် ။ ကျနော် ၂၀၀၅ --ဒီဇင်ဘာ..ခရစ်စမတ် ရက်ပိုင်း..VOA တိုက်ရိုက်လေလှိုင်း အစီအစဉ်ကနေ..ငါးမိနစ်မရှိပါဘူး..ပြောလိုက်တာလေး ( သူငယ်ချင်းဆရာဝန်ပါမောက္ခကြိးတွေ လစာ ဟာ.တလမှ..ဒေါ်လာအားဖြင့်.၁၂ ဒေါ်လာဘဲရတာ ကမ္ဘာသိအောင် လုပ်ပါလေးပြောလိုက်ပါတယ် ။)
န.အ.ဖ ဟာ..ချက်ချင်း..လစာတိုးဖို့ ဆုံးဖြတ်ရတယ် ။ ၂၀၀၆ ဘတ်ဂျက် နစ်အသစ်မှာ တိုးလိုက်တာ...တိုးပြိး..၉-လ အတွင်း စစ်ဗိုလ်တွေ..၁၁၀၀၀ ( တစ်သောင်းတစ်ထောင် ) ကျော်ဖြုတ်ရ..နောက်ဆုံး..လောင်စာဆီဈေးတင် ယူရတော့တာ..ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ ..ပညာသားပါပါ...( ပါးပါးလေး ) လည်လှီးထဲ့ တာ ခံလိုက်ရပါတယ် ။ အဲဒီမှာလဲ..အဖွဲ့ ချုပ် ရဲ့ တိုက်ကွက်..ကစားကွက်.. ထိုးနက်ချက် မပါခဲ့ပါဘူး ။ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ ကို ကျနော် တော်တော်လေးကို လေးစာသွားပါတယ် ။
အဲဒီတုံးက လစာတွေ တိုးပေးပြိးတာတောင်...ဆော်စရာတွေ ရှိနေပါတယ် ။ ကမောက် ကမ ဖြစ်နေတာတွေကို မီဒီယာကြိးတွေကို မေးပို့ ပါတယ် ။ ၀ိုင်းမဆော်ကြလို့ ပါ ။
ဥပမာ..တခု...လက်ထောက်ကထိက ( ဆရာဝန် ) တယောက်လစာဟာ..လစာတိုးပေးပြိးနောက်..၈၅၀၀၀ ( ကျပ် ) ။ ထားပါတော့ အိမ်ထောင်ရှိမယ် ။ သားသမိး နစ်ယောက်ဘဲထား ။ ကျောင်းစားရိတ်..အိမ်စားစရိတ်..ရေဖိုး..မိးဖိုး..ဘာညာ..မလောက်နိုင်ပါဘူး ။ ထားပါအုံး..ကားတစိးတော့ရှိတယ် ။ ကားအတွက် ဓါတ်ဆီခွဲတမ်းက..တလ..၈ါလံ ( ၆၀ ) ..အစိုးရဆိုင်က ဓါတ်ဆီဈေးက ..တစ်ဂါလံ.၂၅၀၀-ကျပ်ဗျာ...သူရတဲ့ လခ က အစိုးရဆိုင်က ဓါတ်ဆီကို ထုတ်ဖို့ တောင် မလောက်ဘူးလေ ။ ဂါလံ ( ၆၀ ) ထုတ်ဖို့ ငွေ..၁၅၀၀၀၀-ကျပ်လိုနေတာလေ ။ အဲဒီလို ကမောက်ကမ ဖြစ်နေတာ..မီဒယာကြိးတွေ ဆီမေးပို့ ပါတယ် ။ ဘာမှအကြောင်းမပြန်ပါဘူး ။ အရေးမပါတာတွေ လို့ တောင် ပြောနေကြမလားမသိဘူး ။ ကျနော်ကိုတောင် ငကြောင် လုပ်နေကြပါမယ် ။ ငါတို့ လို ကျွှမ်းကျင်သူ..ပါရဂူကိုလာပြိး..အကြံပေးရအောင် ..မင်းကိုယ်မင်းဘာကောင်ထင်နေသလဲ လုပ်နေကြပါမယ် ။
၂၀၀၆ ထဲမှာ..အခု..ဘီဘီစီ မှာလုပ်နေသူတဥိးကတော့.( အသိပါ ) ခင်ဗျားကိုယ်ခင်ဗျား ဘာထင်နေတာလဲ ..ကောလာပါတယ် ။
အခု အဖွဲ့ ချုပ်က...စိးပွားရေးပိတ်ဆို့ တာကိုထောက်ခံရင်...ငတ်နေတဲ့ပြည်သူတွေ..က တမျိုးမြင်ကြပါမယ် ။ ကျနော် က တကယ်လုပ်စေချင်တာက..အဖွဲ့ ချုပ်အနေနဲ့ ..စိးပွားရေးကို..ဖွင့်ပေးဖို့ ..အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ ညှိစေချင်တယ် ။ ( ဒါပေမဲ့ ) ဒီ..ဒါပေမဲ့က အသက်ဘဲ ။ စက်ရုံတခုက..အလုပ်သမားတွေကို..တနေ့ လုပ်ခ..( အနိမ့်ဆုံး )..လေးဒေါ်လာ..နဲ့အလုပ်ချိန်ကို...ရှစ်နာရီ ..နဲ့အလုပ်သမား..အခွင့်အရေးအာမခံတဲ့ ကုမ္မဏီ ဖြစ်မှတင်သွင်းခွင့်လက်ခံရမယ် ( ဆို တဲ့ ) ချက်ကလေးခံထားရပါမယ် ။
ပိုပိုလိုလို...တိုင်းပြည်မှာ ..ကိုယ့်ပြည်က ထွက်တဲ့ ( ဓါတ်ငွေ့ နဲ့) စွမ်းအင်ပေးနိုင်တဲ့တနေ့ မှ ဆိုတာပါ ထဲ့ထားလိုက်ပါလား...န.အ.ဖ ကော့သွားစေရမယ် ။ အလုပ်သမားတွေ လုပ်အာခ တိုးလိုက်ရတာနဲ့ .စစ်သားတွေကို သူတို့ လစာတိုးပေးရပါတော့မယ် ။ တခုပြိးတခု..ဆင့်ကဲ ဆင့်ကဲ...ဒိုမီနို ကစားသလို ရိုက်ခတ်သွားစေရပါမယ် ။ ဘာမှတပြည်လုံး ထဆူစရာမလိုပါဘူး ။
ဒါကို န.အ.ဖ က ဆောင်းပါးနဲ့ တောင် ပြန် မရေးနိုင်စေရပါဘူး ။ ဒါကို ကန့် ကွက်ရင်တပြည်လုံး..ထဆူလာပါမယ် ။
အချုပ်အားဖြင့်...န.အ.ဖ က အခု တပြည်လုံးကို လည်မျိုညစ်လာပါပြီ ။ ဂဏန်းလက်မ က လည်မျိုကိုညှပ်ဖို့လည်ကို..ရောက်နေပါပြီ ။ မတရားမှု တကာတို့ ရဲ့ ထိပ်ခေါင်...ကမ္ဘာ့အဆိုးဝါးဆုံး..မတရားမှုကြိးပါ ။ အဖွဲ့ ချုပ်ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်...မတရားတဲ့ အမိန်အာဏာဟူသမျှ...တာဝန်အရ ဖီဆန်ကြ ။ အဲဒီဆောင်ပုဒ်ိကု ဖြုတ်လိုက်ပြီလို့ တော့မသိသေးပါဘူး ။ ရှိနေပါအုံးမယ် ။
အခု ဘာလုပ်ကြမလဲ ။ မှန်အိမ်ကို ခဲသေးသေးလေဒးနဲ့ ထုရင်ကို..( ဂွမ် ..ချလွှမ် ) မြည်ပါမယ် ။ ထုမှာလား..ငုံ့ ခံနေမှာလား...ပြည်သူတွေက အကဲခတ်နေကြပါပြီ ။ အဖွဲ့ ချုပ်ရဲ့နိုင်ငံရေး အသက်ဟာ..အခုဥပဒေ ပေါ်မှာ..ဘယ်လို တုံ့ ပြန်မယ်ဆိုတာပေးမှာ မူတည်နေပါပြီ ။ နိုင်င့ရေး အမြင်ရှိသူတွေကို..တပ်ထဲဆွဲသွင်းပြစ်မယ်ဆိုတာ နဲ့ ဟန့် ထုတ်ပစ်ဖို့ လုပ်လာတာပါ ။ ယောင်လည်လည် လုပ်နေလို့ မရတော့ပါဘူး ။
နောက်တခုက...နာဂစ်ဥပဒေဟာ....ပြင်လို့ မရအောင် ဘောင်ကွတ်ထားပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီဥပဒေကြိးကို အဖွဲ့ ချုပ်က ကစားတတ်ရင်..ပြိုကျသွားပါမယ် ။ ဘယ်လို ဖြိုရမယ်ဆိုတာ န.အ.ဖ ဆိုတာ ဖျက်သိမ်းပြိးချိန်ကျရင် တင်ပြပေးပါမယ် ။ အခုနေ တင်လိုက်ရင် ကြိုကန်တာလုပ်လာနိုင်ပါတယ် ။ အဖွဲ့ ချုပ် ပါဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန် လွယ်လွယ်နဲ့ဖြိုချနိုင်ပါမယ် ။
ကျနော်တို့ က ပြည်ပရောက်နေပါပြီ ။ ဒီမတရားလှတဲ့ ..ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မကျင့်သုံးတဲ့..ဒီဥပဒေကို တော်လှန်ဖို့ ..ကျနော်အားလုံးမှာ တာဝန် ရှိပါတယ် ။ နောက်ဆုံးဗျာ..မရရင်..ယုတ်မာပြရပါတော့မယ် ။ ယုတ်မာမှ ရမဲ့အခြေအနေ ရောက်လာရင် ယုတ်မာတာ မခက်ပါဘူးဗျာ ။ လွယ်ပါတယ် ။ လူလဲများများကို မလိုဘဲ..ယုတ်မာပြပါမယ် ။ ဒီနည်းကို လူတွေ ကို မပြကောင်းလို့ ..မြိုသိပ်နေတာပါ ။ မဖြစ်နိုင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး ။
အားလုံးကို..တကယ်လို့ ကျနော်ရေးသားတာ ကြမ်းတယ်..ရိုင်းတယ်ထင်ရင်..နားလည်ပေးကြပါဗျာ ။ ကိုယ်ကိုကို..စစ်မှုထမ်းရမဲ့သူတယောက်နေရာကေန ၀င်စဉ်းစားပေးပါလို့ ပန်ကြားရင်း...
Share via bro Maung Maung Wann....
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/08/20114အကြံပြုခြင်း
လူထုခေါင်းဆောင်နဲ့တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်လူငယ်များ တွေ့ ဆုံပွဲ [ 8,2.2011 ]
အန်တီစု နဲ့ ဒီကနေ့ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် ၅ခု (ဧရာဝတီ ပဲခူး စစ်ကိုင်း မွန်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ်)ကပါတီဝင်မဟုတ်တဲ့လူငယ်တွေ နဲ့ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးတယ် စစ်ဖိနပ်အောက်ကနေ ခုလိုစုစည်းတွေ့ ဆုံနိုင်မှု ကို ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်ရဲ့ အလုပ်တွေ မှာ ရလဒ်ကောင်းတွေ အများကြီးတွေ့ ကြရလိမ့်မယ် ။ မနက်ဖန်မှာ ကချင် ချင်း ရှမ်း ရခိုင် မန္တလေး မကွေး တနသာင်္ရီ က လူငယ်တွေ နဲ့ ဆက်လက်တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ရှိပါတယ် ။ အန်တီပြောသလိုပဲ လူငယ်ဟာနေရာအတွက် မပြောပဲ အနာဂတ် အတွက် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ မပြောပဲ လူငယ်ဟာ တာဝန်ယူလိုစိတ်နဲ့ အလုပ်လုပ်ရမယ် လူငယ်ဟာတိုင်းပြည်အနာဂတ်ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ကို လူငယ်ထုမမေ့ကြဖို့ ပါပဲ - နေရာနဲ့ တာဝန် ကို ခွဲခြားသိကြဖို့ အမြဲသတိရှိကြရအောင် - (ဒီလိုလာတွေ့ တဲ့လူငယ်တွေ ဟာလူမှုရေးကို အခြေပြုတာပါ တတိုင်းပြည်လုံးနိုင်ငံရေး လုပ်စရာမလိုပါဘူး အများနဲ့ ဆိုင်တဲ့ လူမှုအသိရှိရင် နိုင်ငံရေး နိုင်ငံအရေးဆိုတာကို နားလည်သိ သိလာမှာပဲ ဒီတွေ့ ဆုံမှုတွေက ရလဒ်ကောင်းတွေ အများကြီးဖြစ်ပေါ်လာမှာအသေအချာပါပဲ)
NLD Statement [ 8.2.2011 ]
ပေါက်ခေါင်းလူ့ဘောင်သစ်ဥက္ကဌထင်ကျော်ထက်မှဒေါက်တာလွမ်းဆွေ သို့တုန့် ပြန်သံ အသံဖိုင်
Htin kyaw htet to Dr lwanshwe by yeyintanada
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/08/2011 1 အကြံပြုခြင်း
DPNS`s commetary 2/2011
နိုင်ငံရေး အကြပ်အတည်းများ၊ လက်နက်ကိုင်တပ်မတော် ပြီ...
လူ့အခွင့်အရေး တိုးတက်မှုတွေ ရှိလာဖို့ ပိတ်ဆို့မှု ဆက...
ကြယ်လည်း မပေါက်ကွဲနိုင်၊ နေနှစ်စင်းလည်း ပေါ်ထွန်းမလ...
CFOB supports the NLD’s position on economic sanct...
စစ်မှုမထမ်းမနေရအမိန့်နှင့် တတိုင်းတပြည်လုံးအတွက်အ...
လူထုခေါင်းဆောင်နဲ့တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်လူငယ်များ တေ...